blog — njem Lee - Official Site
"Njem e dere ede a akwụkwọ na m na-eche ọ bụla na-eto eto kwesịrị ịgụ. Ya ahuhu n'ihi na Jizọs na ọgbọ a na-abịa site lewe gị anya na bụla na peeji nke. M ike na-eche ịhụ mmetụta a na ozi nwere on a ọgbọ nke ahụ bụ agụụ na-agụ maka nzube. "- Lecrae, Grammy awarding- emeri artist @lecrae "Bilie bụ a phenomenal akwụkwọ na captures obi anyị omenala. Ozugbo m welitere ya apụghị m idoru ya ala. Njem ịma aka ndị ị na-REAL, na-egosi gị otú ị na-ebi ndụ gị ka bụ nwa agbọghọ dị n'ụwa taa. Great-agụ. "- Sam m, NFL linebacker, akwalite ọdịmma ndị mmadụ @thesamacho "Njem onye deworo akwụkwọ m chọrọ ka m ga na-agụ mgbe m dị obere. ya ahuhu, amamihe, na ọchịchọ na-aka na-eto eto bụ a Agba ọrụ Chineke na-eme site na Njem na-arụ ọrụ o nwere ike ime site n'ọnụ anyị niile. "- Kirk Franklin, Grammy award- emeri na multi-platinum ndekọ omenka @kirkfranklin "M hụrụ n'anya na-agụ Rise. Ọtụtụ ugboro n'akwụkwọ a, m chọpụtara na m medi- tating n'elu peeji nke mgbe m na-agụ ha. A gbara m ume, n'ike mmụọ nsọ, na aka n'ụzọ nile site. The omenala chọrọ ka anyị na imefusị oge ma Chineke ...
Njem ọhụrụ akwụkwọ, ebili, bụ now! -Agụ John Piper si Okwu mmalite nke akwụkwọ n'okpuru. Ị nwere ike tupu-iji akwụkwọ na chọpụta ihe ndị ọzọ na Risebook.tv Otu n'ime isi ihe ndị na-amasị m banyere Njem Lee ya na akwụkwọ, ebili, bụ interplay nsọpụrụ na mkpa. Ebumnuche na mkpa na American omenala bụ nkịtị. Cool bụ ubiquitous. Dị ka Mack Stiles-ekwu, Kasị Kraịst na ụwa ga-atụ egwu-akpọlite ​​aka; America na-atụ egwu na-akpọlite ​​nkuanya. Ọ pụtara na anyị abụghị jụụ. adịghị mkpa. Ma ebumnuche na nsọpụrụ bụ obere. Nsọpụrụ na-adị ochie. Ọ na-adị unexciting. Ọ na-adịghị ajụkwa. Ma onye na-amaghị, N'obi, na mgbe nsọpụrụ aga, niile nke ndụ mmadụ na-aghọ a dịgasị iche iche show. Thin. Glib. emighị emi. plastic. efu. N'ikpeazụ, enweghị isi. Anyị e mere maka ihe. "Cool bụ fickle, na anyị apụghị ịdị ndụ n'ihi na ọ na-"ya bụ, okwu Njem Lee. kpọmkwem. Agbalị ibi ndụ dị nnọọ na-mma, dị nnọọ ka mkpa, bụ ala. Na Njem Lee olu tikuo, ebili! E nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-ahụ, mara, n'anya, na-enwe. E nwere dị adị n'ezie ndị na-uku na ha nwere ike ghara ebelata ka fun. Okwu "fun" "gbawara" "bọl" "party" ada enweghị isi ...
Gịnị bụ Rise Book About?
Ndị jụrụ Njem ihe ya akwụkwọ ọhụrụ bụ banyere. Lee, ọ na-ekwu okwu banyere na nkenke. Ị pụrụ ịmụtakwu banyere akwụkwọ na Risebook.tv
Ebili Street Team
hey okorobịa! My akwụkwọ Rise na-atọhapụ on January 27 (izu na-esote!) na m chọrọ enyemaka gị. Anyị na-achọ mmadụ ndị pụrụ inyere abụ otu akụkụ nke a Street Team ma nyere anyị aka agbasa okwu banyere akwụkwọ online ma na ha na-elekọta mmadụ media. Ị nwere ike ịlele ihe ndị ọzọ gbasara akwụkwọ na http://RiseBook.tv Ekpere m bụ ka Chineke ga-akwụkwọ a na-eji ozi ya aka anyị na ọgbọ na-ebili na-ebi ndụ. Na i nwere ike inyere anyị aka agbasa ozi site na ịbanye elu na-akụkụ nke anyị Street Team maka akwụkwọ. Nke a bụ otú ọ ga-arụ ọrụ ... 1 - Tee HERE. Ka anyị maara na ihe banyere gị, ya mere na ị chọrọ ịbụ a akụkụ nke otu egwuregwu, ma na-eso gị na-elekọta mmadụ media na ndị ọzọ na online njikọ na anyị. My nkwusa ga-atụle ngwa na ọ bụrụ na a họọrọ ... 2 - -Agụ ihe na tupu akwụkwọ. Ha ga-ezitere gị a PDF akwụkwọ na-agụ. 3 - Jikọọ onwe Facebook Group. Ị ga-enweta òkù isonyere a onwe Facebook Group si m nkwusa. Ebe ahụ, ị ga-enweta a ton nke ukwuu ọdịnaya ịkọrọ na ndị enyi gị. Enwere...
Book ihe kwuru: Adịghị ekworo bench
M na-egwuri Varsity basketball n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Nke ahụ bụ a kpamkpam ezi nkwupụta (ma ọ bụrụ na ị na-amanye m ka m kọwaa okwu play). M gara a obere onwe akwụkwọ, na ọ bụrụ na ị a agadi na ị nwetara a ntụpọ na Varsity otu. M hụrụ n'anya game of basketball, kama m na na na a otutu mma na-ekiri ya karịa akpọ ya. M nwere ike apịa Player na iti mkpu "C'mon!"Na referees ihe niile na-kpakpando nkà. Ma nke ahụ bụ dị ka ọ na-aga. My ụlọ akwụkwọ nwere nke a iju-achị banyere n'ezie na-egwu egwuregwu iji jide nzere, ezie na, otú ahụ ka m manyere ona elu kpọgidere isi m na ihere na Friday ọ bụla n'abalị. The ila mgbe niile juru na na egwuregwu. Obi tọrọ ya ụtọ nne na nna na ụmụ akwụkwọ-ọtụtụ n'ime ha enyi nke mine- gosiri elu na-akwado otu. Ọ dị mwute, ha eleghị anya mere ihe dị ukwuu nke a dị iche na egwuregwu dị ka m mere. M ga ilekiri n'ime bleachers site n'oge ruo n'oge, -eche ihe niile ahụ nọ na-eche echiche, karịsịa papa m. Echere m na ọ ghọtara na anyị abụọ nọ kpọmkwem n'ebe ahụ na-ekiri, ma m mere nwere mma oche. Naanị oge m n'ezie mere ya na na n'ala bụ na ...
Ebili Book ihe kwuru: 7:00 A.M. Logic
M afọ iri na ise ochie na ndụ m a na-tụgharịa ntughari. My aha na ọdịdị na-agbanwebeghị, ma ihe ọ bụla ọzọ banyere m nwere. M a kpamkpam dị iche iche mmadụ karịa m ọrụ afọ ma ọ bụ abụọ tupu. Anaghị m pụtara dị ka mgbe ndị mmadụ ịga mahadum na re-ike onwe ha na ọhụrụ nicknames na mmadụ; M pụtara ihe ịrịba ama akakade on n'ime m. M ghọrọ Onye Kraịst. M chere ọhụrụ. M chere na ndụ. Ana m enwe ezi ihe nke m nwere iji gwa ya onye ọ bụla nke chọrọ ige ntị, karịsịa m ezigbo enyi na ezinụlọ. Mmadụ niile dị iche iche na mgbanwe m-ụfọdụ na ọṅụ, ndị ọzọ na-eguzogide-ma otu mkparịta ụka mgbe gbapụrụ m. M na-ekwu okwu na onye mere agadi onye m nke ukwuu na-akwanyere ùgwù, obi ụtọ ịkọwara m game atụmatụ maka asọpụrụ Chineke m si ebi ndụ, kpọmkwem ụdị mmekọahụ m adị ọcha. M na-agbalị ijide onwe gị banyere ya, ma ọ na-esi ike jide m obi ụtọ na. Dị ka okwu leapt si ire m na ihe na-ekwekọghị n'okike ijeụkwụ, M ghọtara na ya abụghị onye dị ka obi ụtọ dị ka m bụ. Ọ na-agbalị na-ege ntị na-eji nwayọọ, ma ya n'ọdịdị ihu zara n'iru ya ...
Ebe a na-niile lyrics maka Njem ise studio album Rise. Pịa na song aha ịhụ lyrics maka nke ọ bụla track. -Enwe ma na-eso na enyi! 1. ebili 2. ọkụ On 3. Shweet 4. Manolo ft. Lecrae 5. Ị na-amaghị 6. All bilie (Interlude) 7. All bilie 8. Mara mma Life 2 (nke m) 9. Insomniac ft. Andy Mineo 10. ihe New 11. Lazarus ft. This'l 12. All My Ịhụnanya ft. Natalie Lauren 13. M gawara 14. Sweet Victory ft. Ala Rọshịa bụ Dmitri McDowell na Leah Smith
nko: (ala Rọshịa bụ Dmitri) M na-eche ogwu ebe m okpueze bụ m ga-adịghị ike ma dị m ndụ Site ájá ruo mgbe chi ọbụbọ yeah m ga-adị ndụ na-akpata m nwetara Sweet Victory dịghị onye nwere ike were ya n'aka m Sweet mmeri akpata m nwetara, sweet mmeri yeah Amaokwu 1: Ị na-ahụ m enwe , Amaara m na ị na-ahụ m enwe Ị gaghị agwa on a CD, ma dị egwu m ikpere miri emi na ya na m na wading m adịghị ike, o mere ka m dabere m ga-agha ụgha site m ezé na-ekwu, anaghị m ewe iwe megide ya Ọbụna dị ka m dee a chọpụtara na m na nso anya mmiri My ahụ na-adịghị arụ ọrụ nri ruo afọ asaa Ya mere uche m na ahụ "na- gị agba elu-agbalị ọchị "Bruh m iri abụọ na isii, M ga-eche mma site a mile Na-niile gị nkenke akụkọ nkụzi na cute ruturu m ga-agafe na clichés maka ezi olileanya, ọ bụ kwa dope nko Post nko: Tost na King, ekele dịrị ka uko ụlọ Mmetụta mma anyị gon 'ime ka ọ ruo n'isi Sweet mmeri Ị anụ m, holla ma ọ bụrụ na ị na-eche m Anyị ka na-agba ọsọ ahụ n'agbanyeghị na anyị enwe Sweet mmeri akpata anyị na-emeri, yeah ị maara na anyị na-emeri ezie na anyị winded anyị ...
Track 13: M gawara
amaokwu 1: Ọ bụ ihe na uche m na-eme ị nwetara a oge? Soapbox swag, M dị nnọọ wee n'elu ya, m nọ na a agbụ ígwè na ike gwụrụ m nke na ọ (Car mkpọtụ) Amaara m na ị na-anụ a na taya rubbing Screeching ala n'okporo ụzọ, Na Na pụọ ​​m na-akpa nkata m ụzọ mgbapụ, Echere m na nke a n'ụbọchị '-akpata m kemgbe nọ n'agbụ na ya aghụghọ ụgha chọrọ isi tọhapụ onwe m ma ọ bụghị ruru eru Get em elu, na-em elu, na-em elu Novacane na ahu m, ọ dịghị m na-adịghị enwe mmetụta ụgha Ha na-ekwu na m nnu nnu na ha nwere ike na-akatọ Ma m na-ekpe ekpere maka slaying, ike na-eche maka ya onwu Tupu ị na-asụ ude, na-agwa ndị mmadụ m gawara m na-ekwu n'obi na onye emeriri lucifa, ị maara na ọ dị njọ m maara na ị na-adịghị jụrụ iji tipịasịa na ekwentị Ọ dị njọ ma ọ bụrụ na m na-etipịasị na a song? nko: M na-anụ ihe ị na-ekwu, ma Ekwetaghị m gị 'na-akpata na ị dị nnọọ ike na-agha ụgha, na ọ dịghị m mkpa ị na m nwetara ọhụrụ nwe-ayi, M maara m ghara ịhụ ihe ị Ma m na-ahụ ezi site gị, otú ahụ ka m enwere ahapụ gị (ikwugharị 2X) amaokwu 2: Ugboro ole ka m enwere Gwa ...
Track 12: All My Ịhụnanya
Intro: (Natalie) M na-ahụ gị na-ekiri na-adị gị ihe ị na-ahụ? Abụ m ekewapụkwa? Ọfọn, sorta ọ dị ka ma eleghị anya, Gịnị ka i nwere n'uche? Ihu gị anya maara m na-ahụ gị mgbe niile M nwere ike na-ị na ụlọ ọrụ n'abalị Ị na-adịghị enwere agwa dịghị onye Ọ bụghị-adịghị onye ọzọ gburugburu na-ekiri Yeah naanị kwuo okwu na ị nwetara ya Right ebe a, ugbu a Amaokwu 1: Jay bụ owu na-ama na ọ na-achọ ịhụnanya na net A mmadụ nwere mkpa, ihe ị na-atụ anya? O lere anya n'oge nile ha peeji Ma mgbe ọ hụrụ ya nwoke chụọ ya ume akpata ọ bụ ịhụnanya na mbụ n'anya mgbe ha zutere Ya obi na-eti ike Ọ bụ ọ dị ka ìhè gbara akpụkpọ, anya dị ka o nwere mmasị ha na-alụ ọgụ ha otú obi mgbe ha tiri gị a siri ike Ọ bụ anya, ya mere, ọ bụ na ya online mgbe niile Ọ na-arụ ọrụ ma a girl bụ ya n'obi mgbe niile Ọ nwere ike na-eche ịhụ ya, enye ọkọdọ ha n'ibi atụmatụ Mgbe ha ọnụ ọ na-emetụta ọ enwere ụgwọ na Visa Ya homies dọrọ aka ná ntị ya "jiri nwayọọ na-na nwanyi enweghị ike mezue gị" Ma ọ bụ na-egwu nke ịhụnanya o adịghị ...
amaokwu 1: Nwa okorobịa m hopped si n'ili mma ụtụtụ na m e-ehi ụra n'ihi na kwa ogologo m na-yawning Onye ọ bụla na-ekwu okwu na-agbalị ịhụ m, ekweghiekwe Dị otú o iku ume? Ọ bụ isii ụkwụ miri emi Boy ihe ị na-ekwu? Chere kpuchie ọnụ gị Dead ụmụ mmadụ apụghị holla, ihe ị na-ekwu okwu bayere? 'Meenụ ka otu ugboro site na ụzọ ọ na-adịghị eje ije Ma ka m kpọrọ gị azụ na oge m akpati ozu now Ooh maara na ị na-esi isi ya na ikuku akpata m kemgbe nọ n'ili maka kwa ogologo m ṅụọ iyi People ákwá m na-efu efu, banyere ozu e dere My ihu icha mmirimmiri, ha apụghị ịgwa obere nwa gị nwoke banyere na-bilitere Close na akpati ozu, -akpọ ndị na-ekwusa, ọ nke mere arahụ Ọ bụ n'elu-apụghị dịghị onye iru ya, -ekwu otú ogologo Ma jigide, tupu ị na-eti mkpu ma na-agba ọsọ m nụrụ a na-abịa, ikwu ihe na-eti, "pụta" Tupu nko: Hopped si n'ili, ụtụtụ ọma m na e-ehi ụra n'ihi na kwa ogologo m na-yawning Ha wee lie m na nwa uwe, black tie m ndụ na m tetara na-achọ ofufe mere site ugbu a nko: Site ugbu a na i nwere ike na-akpọ m Lazarus Site ugbu a na i nwere ike na-akpọ m Lazarus si ...
Track 10: ihe New
Intro / sample: Chere, chere Ka m nweta onye ọzọ (ikwugharị 4X) amaokwu: Boy ị maara na m nwetara ha J si, mkpatụ ha ụkwụ m ejide elu craze, m kaboodu na-adịghị mezue Ị maara m nwetara ha 5 si na m nwere ebe ha 12 si Ma unu maara ha 1 si m chọrọ n'ezie bụ na-ere Ya mere a di na nwunye ọzọ clicks na saịtị, ruo eme m ka dị nnọọ mma Bruh enwere m edebe ihe m sneaker game uko Ọ bụrụ na mmadụ nile na ka ha homie na-adịghị ihe m na-amasị Ugbu a onye obula wanna abụ dị ka m kama Mike My iri mmadụ ahụ bụ bụghị inyom ma ọ bụ ndị booze Sneakerheads amaonye, M na-itching n'ihi na ụfọdụ akpụkpọ ụkwụ Tinye ya na kaadị, M na-adịghị nwetara ihe ọ bụla na-atụfu Mgbe ụfọdụ, m na-eche ihe ọ bụ m wanna iji gosi akpata m wan't ihe ọhụrụ Ihe m nwetara ya agaghị eme Echere m na m nwetara ụfọdụ dị flu akpata na m riri ahụ na ọhụrụ Ọ nwetara m dị ka Outro / sample: Yeah ya nwetara m ka chere, chere Ka m nweta onye ọzọ (ikwugharị 4X)
amaokwu 1: M na-aga na taa a na m naanị gbara My ndụ pụrụ taa Yeah obi m nkwụsị Ọ bụrụ na m pụọ n'abalị a m na-aga si n'elu m na-enye ya ihe niile a na ndụ bụghị ihe niile m nwetara Yessir now na-eche na a nkeji bruh m -ahụ y'all mkpatụ gị aka elu-eche ka na ụda ka e gbupụ, 808'S on nọrọ na njikere Mgbe m na-eku ume bangers m na-ekwu okwu ndị na-m ịnọ The ala gon shake mgbe ahụ kwaa dobe, Mbuzo Biko, ka m apụ m leash m na-eche na ọ, M na-eche na ọ, Eme m ka ihe na-apụghị Dị ka m a anụ ọhịa Dị ka a ozodimgba onye bụ onye n'ezie na hundu mere, m na-aga na na on Aga m na-ezu ike mgbe m hapụrụ Rise na ikwo ihe na ihe m na na na Bruh na ihe mere m dere na song Tonight m na-aga anya dị ka My ndụ aka dị nnọọ dịruru-abali ọ bụrụ na m na-agaghị eteta eteta ruo ụtụtụ, bruh m na-gon ịbụ na naa itu ịkpachara anya ka ifufe Ka aga anyị n'obi na-aga na No selata, anyị gon merie No selata, anyị maara ya Nwesịrị Iji Tuo Ọnụ Nga nko: Tonight Aga m na n'ihe ize ndụ ya niile na-eso na-ebi ndụ dị ka ndụ m ...
Track 8: Mara mma Life 2 (nke m)
Intro: Oh, a hụrụ m gị n'anya, yeah ka mba ndị ọzọ, yeah Mgbe m hụrụ gị ọchị gị na-enwu dị ka okpomọkụ, yeah Amaokwu 1: Ị maara na mmetụta mgbe ha okwu ada O siri ike verbalize ihe m wanna-agwa m mini m, m obere nwoke na-ekwu okwu na nwa okwu, Amaghị m ihe ị na-ekwu, sị Ma ọ bụ music m ntị ezie na ọganihu bap gị Papa mgbe m na nso ezie na Mama-etinye gị na ha polos na skinnies mgbakọ fee ọhịa, ị na-flyer karịa a Leer ezie na I nwetara na a gwara agwa nwa ewu swag on ha N'ileghachi anya dị ka gị mama na papa gi na ha hoo haa akpa nwa gị na-adị ọhụrụ e tiri m nkpu ike otú a ruo mgbe m na-enweghị anya mmiri ekpe Kemgbe ahụ ị na-a ọnụ ọchị on irum mgba kwa egwú, ọhịa, ke ebiet Lee m maara na ị nwetara aha m Ma m chọrọ yi ya dị ndụ n'ihi ude ya, M hụrụ gị n'anya nko: Oh, M hụrụ gị n'anya ka mba ndị ọzọ Mgbe m hụrụ gị ọchị gị na-enwu dị ka okpomọkụ My ọhụụ nwere ike ịbụ ghọtakwuo dịghị nweghị dịghị-akpata ị mara mma, ọ bụ ihe ijuanya m hụrụ gị n'anya m nwere ike ọ bụghị ...
Track 7: All bilie
sample: Ọ bụrụ na anyị niile na-ebili, oh yeah oh yeah (megharịa) amaokwu 1: Amaara m na anaghị m kwesịrị na-emetụ ndị Maị dị egwu Ma nke a craft bụ ihe m na-alụ ọgụ maka m na lab na a pen na a na mpe mpe akwa Ịmara M wee wuchaa ikpeazụ, na bụ n'ezie ihe mere m ji dee thoughLet si laa azụ na oge '04 m zutere 116, ngwa ngwa ka m nọ na osisi Fast atụ afọ anọ, anyị on tour Ma anyị na-amaghị kpọmkwem ihe o nwere na-echere Ma ugbu a, lee, anyị nọ ka afọ iri gachara, aga nwetara ukwuu nkekọ n'abiaru nso, gbakwunyere na ọ bụ ihe ndị ọkpọ asị sị na anyị dị nnọọ na-eme ya n'ihi na mgwakota agwa, ma ha agaghị agbaji anyị 'Meenụ ka Onye-nwe-ayi anyị na-efe ya na eruba ọ bụ ya mere na-eme amara Ma ọ bụrụ na ha na-ajụ m ihe mere m na-eme ya na m na-agwa ha na ọ bụ nke music nke a ije Yeah m na-ekwu okwu n'ihi na m unashamed ndi oru ugbo na-agaghị emetụ a ogbo ma ha na-eje ije ya newness bilie Nga nko: Ọ bụrụ na anyị niile ịrị elu upThat ga-abụ m nrọ Anyị niile kwesịrị ibili nye a eguzo O n'ihi na eze akpata ọ dị mma Oh yeah, oh yeah Oh yeah,...
Track 5: Ị na-amaghị
Intro / sample: Ụfọdụ ụbọchị na-adị m ezigbo nso Ma ụbọchị ụfọdụ o yiri nnọọ Nanị ịdị mma na ebere ga-mgbe niile na-eso Ma ma gaghachi chakoo, oh Hallelujah ịbụ ndị kasị elu otuto m ga-enye ya unu ji ọṅụ m dum ụbọchị m dị nnọọ olileanya na ndụ m nile egosi na m na-ekwu okwu nile ọ bụla, ooh N'agbanyeghị na ihe ọjọ m Jesus, Oh Jesus, My Jesus, na ihe mere m unu n'anya nke Amaokwu 1: Nwa okorobịa m na-eche dị m gliding-agba ọsọ na-eme ka m ntuli aka n'aka, Obama Biden (weta ya?) -Adị kwa ụbọchị na m na homiciding Igbu na villain n'ime m, mgbe ụfọdụ ọ na traumatizing (ọ bụghị ya?) Ma Bro ọ bụghị ihe ijuanya na ọ na-enye m ọṅụ mgbe m jidesienụ okwu ya na m na nkwa-agba m ekwe nkwa na m e regretting ya mgbe m na-adịghị erube isi M na a gụrụ, kama m na na na ya okwu ọzọ: Na na na na nzuzo na-eche dị m nwetara a onu ke otu Ha na-atụba ndo, ma na m na-enwu gbaa na-eme ka m mara na Nwa-eche dị ka m na-arọ nrọ na anya unu oghe, m uche sere n'elu Gliding site elu-igwe adahade, igwe-oji 9 nke ahụ bụ m oké osimiri Igwu na na ikuku ozone Layer Hey m na-Nrịrọ Ma ọ udo na ọkụ ruo n'okpuru m n'azụ m ise siga na-apụghị ...
nko: M eme ya n'ihi uzo elu nwetara na ammo ekpochi we bo m na-adịghị ekwu okwu banyere enweghị burner tụgharịa a page, M ga-agbawa ya Wee na a ụlọ na Manolo (nolo) Manolo (nolo) Manolo (nolo) Manolo (ikwugharị 2X) amaokwu 1 (njem): -Agbalị ịgwa ha ụmụ nwoke dịghị mgbe m na-ahapụ akpati naanị akpata na m na-otu na ụgbọala m na m nwetara abụọ n'ụlọ Ha dị iche iche, ma ha ime otu ihe ahụ ugboro abụọ n'ọnụ ọnụ, abụọ gbọmgbọm, Bang Bang na m ebe a chere ihu dragons, M bụghị si uche m Ha na-abịa maka mkpụrụ obi m, ya mere, nke tuanu na oge Ha ụgha ha na-agbalị igbu m, ma ọ bụrụ na unu ekweghị m M ịma, M ịma, M ike were ya nwayo m na-ịpịgharị a page, Na na na triga-enwe obi ụtọ a clip na a nlele ịpị ya, ọkụkụ na ogbo See ị na eziokwu, ya nile ọ bula okwu ọ napụrụ m miri m ndakpu mmiri, Na na na mmiri na Mgbe m agba m nwetara na ọkụ ọkụ, M na-ndụ ọzọ Mewe Enyi Maka Mmekọahụ Amaokwu 2 (Lecrae): Manolo Manolo, M na-esi ebe a na-aga ozi nzi My mmekọ eche na m furu efu ọ, m mama eche na m na loco m edebe ihe m shooter nso ezie na, ị ma na ọ n'ụzọ zuru ezu ...
nko: -Esi na ha aka na ikuku Mee a obere mkpọtụ na ila ọ bụrụ na ị nwere Nwesịrị Iji Tuo Ọnụ na Godman ọ bụrụ na ị na-ama na, naanị ma ọ bụrụ na ị na-akpọ ụmụnna Ọ ga-shweet Gịnị ma ọ bụrụ na mgbe ị na-etu ọnụ na ọ bụghị 'n'obi ndị uwe na tags? Na ga-shweet Gịnị ma ọ bụrụ na mgbe ị na-etu ọnụ na ọ bụ n'obi ya onye bụ onye mbụ na ndị ikpeazụ? Na ga-shweet Post nko: Anurum ka ha na-ekwu okwu dị ka ha na-ekpo ọkụ nwoke Madu ọkọdọ ha gassed elu, on na octane Lee m kpọrọ asị na-agwa ha na ha abụghị mma Better nweta a nche anwụ, Chineke na-achị achị Amaokwu 1: Ka na-aga azụ na oge mbubreyo eighties D obodo jide m ala, nke ahụ bụ ebe ha mere ka m Mgbe m laghachi n'ebe ahu, M adịghị vaca-ah u (ezumike) Na-ele ka m home, -eche echiche banyere na-anọ, M na-adịghị na-anọ ezie Ooh ama ama Lone kpakpando ala bred, otú m pụrụ ichefu ya Ma m na-adịghị gbapụta ndị na-acha anụnụ anụnụ Ọ bụ ofufe otú o ikpa efe m, M na-adịghị ekwu okwu bayere akpọ ụkwụ, oge ịse m nwetara ọtụtụ nsogbu ma m ogologo, nke ahụ bụ shweet m maara Chineke m ga-amali elu ha n'ime ọdọ, na nke ahụ shweet Olee otú ọtụtụ ugboro m na enwere agwa gị ...
Track 2: ọkụ On
Intro / sample Oh oh, ìhè Anyị amaghị ebe anyị na-aga (megharịa) amaokwu 1: Ele anya gburugburu ọ bụ ihe niile ọchịchịrị, oji nile Dị ka nde mmadụ njem, ma m na-agwa n'obi ihe niile Dark obi, ọchịchịrị mkpụrụ obi Dark uche ede ọchịchịrị aga Enwere m ike inwe obere ìhè ezie na? Bụ na ihe m nwere ike ọgụ ka? Hey anyị otú ìsì anyị amaghị On na okporo ụzọ anyị na-aga Gaa ngwa ngwa, -efe efe ma anyị ala Ma anyị amaghị nnọọ uru ọ na-ụlọ ahịa, ọzọ-ada ada n'ihi na okie doke Nope, ọ pụrụ inye anyị n'anya maka ihe ndị anyị na-agụtụbeghị 'Ruo na ìhè ga-esi na achasi, anyị amaghị ebe anyị na-aga Ma ọ bụghị dịghị google map maka ndụ, na ọ bụ dị ka anyị nnukwu ọkụ ihu na-gbajiri Gosiri: anyị na-egbu maramara, agafe on ụfọdụ akụ nke ahụ bụ ọlaedo N'ihi na ụfọdụ nickel na ọla kọpa, -agbalị iji nweta otuto nke ahụ na-zuru na iwe ihe ubi ihe anyị na-agha mkpụrụ Hey anyị niile nwetara nrọ, nke a bụ nke m na m na-ekpe ekpere na ọ ga tụgharịa na mgba ọkụ na-enwu, na na-ìsì Anyị maara ị nwetara ya, Jehova anyị maara na ị nwetara ya naanị gị nwere ike na-ayi elu, ị na pilot Ìhè biko Mewe Enyi Maka Mmekọahụ Anyị ...
Track 1: ebili
nko: Taa bụ ụbọchị ahụ mgbe anyị niile ebili My arịlịka na-arahụ otú na-ekiri m abịa dịkọọ ndụ anyị na-eguzo megide ere ọkụ ụgha na ugbu a na m hụrụ m nku m njikere ịga Bilie, anyị niile ebili Oh oh oh Anyị niile ịrị elu Oh oh oh Taa ụbọchị Rise Amaokwu 1: Chere m azụ na-anya isi na ndị a na tracks dị ka m na-apụ ara na em, nwere ike kwado ụra mics hapụ uche eziokwu dịghị mgbe m hapụrụ m mama Listen up right ị na-adịghị enwere ajụ m ugboro abụọ m ebe a, M ebe a na-etu ọnụ na ya ka m na-mara maka ezie na folks ikwoura I'ma-aga n'ihi na ọ My Chineke abụghị dịghị akụkọ ifo, 'Ime ka ọ n'ezie, ọ n'ezie Ugbu a isiokwu na n'aka m maara na mmebe, ọ bụ elu karịa ụgbọelu na-efe efe elu n'ígwé ojii ọ haziri jiri aka ya na m na-ede na-agwa gị ndụ a bụ a flash na a pan Olee I'ma ịla ezumike nká mgbe anyị kwesịrị a cryer na-agwa anyị ka anyị bilie guzo? Lelee yo ezube My Dude, na ili adịghị n'ụlọ gị gị na-eme ka unu anọwo n'okpuru ala ụzọ kwa ogologo isii miri emi na a ụbọchị on your nkume All ha na-ekwu,...
-amịpụta: Gawvi ọzọ vocals site: J. Paul osise site: Alex Medina Mixed na mụtara site: Jacob "Biz" Morris Amaokwu 1: Unu dịghị onye wanna-anụ mwute anyị Nke ahụ bụ otú m ka mgbe m na-ịpịgharị site na ha Twitter comments, niile m na-eche bụ mmiri ozuzo Ha na-agwa m aka na ọ bụ agadi Nke ahụ stof adịghị adị ọzọ Ma na-adịghị iba ezi mgbe m anya na a n'okporo ámá Ya mere na ọ bụ ezigbo mgbe m na-eche dị ka ọ coulda kemgbe m nko: Man m nwere ike ịgwa gị ihe ndị na-eme m ugbu a Ah ha wanna maara otú eme m ka ugbu a m na-eche dị ka ya coulda kemgbe m dị m ka m na ọ coulda kemgbe m dị anyị nile mere anyị n'onyinyo Chineke ka ị maara All ndụ anyị mkpa, anyị ọhụụ bụ mebiri Anyị na-eche ihe mgbu na-akpata anyị nọ n'ebe a n'ihu Ònye bụ emeghị ihe ọjọọ m na-amaghị Ma, ọ coulda kemgbe m dị m ka m na ọ coulda kemgbe m Amaokwu 2: Amaghị m Mike Brown m na-amaghị Trayvon amaghị m Sean Bell Ma, m maara na ha esiwo m na-amaghị Oscar Grant ma ọ bụ Tamir Rice amaghị m Eric Garner Ma, m maara na ha ndụ dị ụtọ karị karịa ha ...
Coulda Na Me
Obi m na-arọ. M maara na Chineke dị mma, nakwa na Ọ bụ na-achịkwa, ma obi m na-arọ. Ikpeazụ izu mgbe ihe na Ferguson (na Ibọrọ ya na mmadụ mgbasa ozi), Na m nwere obi anyịgbu dee a song. My mgbaru ọsọ bụ ime ka ihe ọ bụla magburu okwu ma ọ bụ declarations, ma na-egosipụta n'ụzọ ihe niile mere ka obi. N'ihi ya, m malitere ekewetde, na nke a bụ ihe we puta. The mmetụta na kwughachiri dị m n'obi bụ: "O nwere otú na na m." M nwere a dum post njikere on otú Ndị Kraịst kwesịrị ikwu na oge ahụ, ma mgbe akukọ Eric Garner ụnyaahụ, M kpebiri na m na-eche na post na mgbe e mesịrị. Maka ugbu a, M nnọọ na-ekwu na m nwere oké obi. Enweghị m mmasị na nrụrịta ụka ma ọ bụ arụmụka ugbu. M nnọọ na nnwere onwe na-egosipụta m ewute. M na-emejọ n'ihi na Eric Garner video na-agbalị ibibi na-ekiri. Mgbe mụ na nwunye m mbụ na-ele ya ọnwa gara aga, anyị abụọ tie. Ndụ bụ a mara mma onyinye, na ọ bụ akpali iche echiche na-ekiri na ndụ ahapụ onye ahu - karịsịa mgbe ọ na-e site ndị ikom ndị ọzọ. m chere, "N'ezie, ndị mmadụ nwere ike ọ bụghị ...
New Book mwepụta Ikebịghike
My akwụkwọ ọhụrụ, ebili, -abịa si January 27! Ọ ga-abụ dị n'ebe ọ bụla akwụkwọ na-ere. Ị nwere ike tupu-iji ya ugbu a ma na-eleta akwụkwọ website na Risebook.tv. Biko Onye-nwe ga-eji ya na-agba ume m ọgbọ na-ebili na-ebi ndụ. Ekiri ụgbọala na-adọkpụ n'elu na-agụ a obere nkọwa nke akwụkwọ n'okpuru: Society na-ekwu, oge ntorobịa bụ oge maka nweere onwe okwu, ma Njem Lee na-ekwu na Chineke na-akpọ onye ọ bụla ka o sikwa ná slumber, n'elu ala na-atụ anya, na-ebi ndụ n'ihi na bilitere King. Ụwa na-agwa anyị na anyị mmalite afọ ndị a ga-irresponsibly ụtọ kama ewepụtara na nchụso ndị nwere nzube. A gwara anyị na ibu ọrụ na nkwa ndị ibu ga-atụpụ dị ka ogologo oge dị ka o kwere. Ya mere, ọtụtụ n'ime anyị na-eji ntorobịa anyị na a ọnọdụ dị mwute nke slumber-n'ụra on ndụ ruo mgbe anyị na-amanye bilie. Nsogbu bụ na ndụ amalitelarị. Ọ na-eme ugbu a. Na Chineke akpọwo anyị na-ebi ọ na-. A dị ike na akwụkwọ, Njem Lee rụrụ ụka na ọ bụ oge na-eteta na-ebili, na-ebi ndụ n'ụzọ na e kere anyị ibi. Ma okenye ma nwata, anyị na a na-akpọ ibi Ya. Ugbu a. Young kwere ekwe ihu na-...
-Anụ ụtọ artwork ị hụrụ maka Njem si ọhụrụ album, ebili? Mgbe ahụ jidere a shweet akwụkwọ ahụaja maka ekwentị gị otú i nwere ike inwe ya na ị mgbe niile. Download iPhone akwụkwọ ahụ aja
Mgbe mmeri ọkwá anya dị ka losers
Gịnị ka mmeri ele anya dị ka? Ọ bụ na ha toro ogologo ma ọ bụ obere? Black ma ọ bụ na-acha ọcha? Strong ma ọ bụ na-adịghị ike? Echere m na ọ dabere na ihe anyị pụtara site "-eto eto." M na-ghọgburu iche akụkọ nke otu-eto eto a n'ọnwa gara aga dị ka a na-agụ ogologo, ma-ekere òkè biography nke Michael Jordan. The ndekọ zuru ezu banyere chetaara m ihe mere na ọtụtụ ndị mmadụ ibu na ya ókè-ala-on dike ofufe. Ọtụtụ ihe a pụrụ ikwu banyere "ya airness" ma ọ dịghị onye ọ bụla pụrụ ekwu na ọ bụghị a-eto eto. Ndi enye ama-ele anya dị a-eto eto tupu ya na ndị niile egwuregwu yiri mgbaaka, ezie na? Ka ị na-agụ akwụkwọ, o yiri doro anya ya na nwata na ya ga-a mmeri. Ma nke di ya pụtara ìhè play dị ka a obere otu ite ma ọ bụ dị ka a keobere Varsity basketball player; ya n'ụlọ akwụkwọ dị elu ibu spurt ma ọ bụ ya game emeri gbara n'oge ya Freshman afọ na UNC. Site na mgbe m ruru ebe isi banyere ya n'asọmpi dị ka a Chicago ehi, e nweghị ịtụnanya. Na-ede gwara akụkọ ya n'ụzọ na-mere ka o doo anya: Jordan a mụrụ na-a-eto eto. Na ọ bụ ihe anyị maara ya n'ihi na: emeri isii egwuregwu yiri mgbaaka, ise MVPs, na 14 All ...
chere, Njem - Ọ bụghị ị lara ezumike nká?
Otu di na nwunye ọnwa gara aga, m juru onye ọ bụla site n'ịkpọsa a ohuru album, "-Ebili." Ị na-aghọtaghị otú ike ọ bụ ịgba nkịtị banyere ya n'ihu m labeelu na m gara n'ihu ọha. The album ama na ọrụ ihe karịrị otu afọ, na m nwere ike na-eche na agwa onye ọ bụla - karịsịa ndị na-nọgidere na-arịọ mgbe m na-atụnye n'ihe ọhụrụ. The omume mere nnọọ kemgbe miri emi na-agba ume. M tụrụ na ndị mmadụ nọgidere na-akwado m ezie na m na na na mara mma jụụ n'ihi na nke ikpeazụ afọ abụọ. -N'anya-gi na obi ụtọ ka naanị ụba nke m. Early Retirement Otu n'ime ihe ndị na-azaghachi m na ọ bụghị iju site bụ onye a: "Chere, M chere na ị lara ezumike nká?"Nke a bụ ajụjụ na-eso m gburugburu dị ka onyinyo. M na-agwa okwu ya na ajụjụ ọnụ, tweet, na blog posts, ma m maara na ọ bụ ka edoghị ka ụfọdụ. Ka m anọgide na-agbalị ka ihe ndekọ ogologo: Ọ dịghị mgbe m lara ezumike nká. na 2012, M mara ọkwa na m ga-enwe "n'itinyekwu n'ebe music." Ee, Ama m na-ada ezumike nká-nwoke, ma m purposely mere neji okwu. M wee na-ya kpachapụrụ-edochaghị anya n'ihi na m bụ bụghị 100% n'aka na ihe ọ ga-ele anya dị ka. Amaara m ya...
etu ọnụ Wallpaper
Mkpa a kwa ụbọchị ncheta na ị na-wuru na-etu ọnụ? Anyị na-na na-etinye ọnụ a ole na ole akwụkwọ ahụ aja maka ekwentị gị, mbadamba, ma ọ bụ nelu ihuenyo. E nwere atọ dị mfe nhọrọ n'okpuru na-etu ọnụ logo. E nwere ihe ọzọ na-abịa mgbe e mesịrị. enwe! Download iPhone akwụkwọ ahụ aja • Download iPad akwụkwọ ahụ aja • Download desktọọpụ akwụkwọ Download iPhone akwụkwọ ahụ aja • Download iPad akwụkwọ ahụ aja • Download desktọọpụ akwụkwọ Download iPhone akwụkwọ ahụ aja • Download iPad akwụkwọ ahụ aja • Download desktọọpụ akwụkwọ
Ná ndụ, M na-arahụ site na oge mgbe m na a n'ezie kpaliri na-arụ ọrụ. Mgbe m nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị, m dị nnọọ chọrọ ịbụ buff iji na-adọta mmasị ụmụ agbọghọ (m dara). Ke ọnwa tupu m agbamakwụkwọ m na-agbalị ịrụ ọrụ na m honiimuunu osimiri ahu. Ụbọchị ndị a, M na-nnọọ na-agbalị iji jide n'aka na m na-ebi gara aga m n'afọ iri abụọ. My mkpali gbanwere ihe karịrị afọ, ma ihe agbanwebeghị bụ otú fickle ndị mkpali na-. Ma eleghị anya, ị na-ndammana kpaliri na-arụ ọrụ-nkpu pua ndị enyi m biputere eserese na vidiyo nke ha ọzụzụ Usoro ụbọchị ọ bụla. Ma ọ bụrụ na ị dị ka m, gị mkpali aga na ala ka a nwa ewu on a trampoline. Gịnị ma ọ bụrụ na ya pụta si arụ ọrụ gị si dịruru ruo mgbe ebighị ebi, ezie na? Ị ga-enwe ihe kpaliri? Ike ọrụ ahụ rụpụtara N'oge Winter Olympics ikpeazụ nke ọnwa wụrụ m ibobo dị ka m na-ele àmụmà ngwa bobsledders na highflying snowboarders. M ha masịrị egwuregwu mma, ma m ọbụna karị masịrị mgbe m chere banyere ha ahụhụ ọzụzụ ọ na-aghaghị iwere iji ruo ebe ahụ. Ná ngwụsị nke ọ bụla omume mgbe mmeri na-eme egwuregwu guzo-kwa-eto eto si ...
5 Ajụjụ maka Beyonce
Music bụ nnukwu akụkụ nke ndụ m otú m na-eche banyere otú iji ya kacha mma. Ọ na-esiri m ike ịnụ ụtọ nkà na-enweghị nyochasịrị, -edetu, na-ajụ ha ajụjụ. Beyonce nwere na anyị na mba anya ugbu a na ọ bụ ihe doro anya otu nke anyị kasị hụrụ n'anya pop kpakpando. The mbụ na nwaanyị ọbụna kwuru ma ya ga-onye ọ bụla ọzọ, ọ ga-achọ ịbụ Beyonce. Beyonce bụ ihe na-ewu ewu karịa na ọ na-dịtụbeghị, otú i nwere ike ọ bụghị agbanye TV ma ọ bụ na-online enweghị na-ahụ ihe banyere ya, si reviews nke ọhụrụ ya album na foto nke ya na-eje ije n'okporo ámá na nwa ya nwaanyị. M na-masịrị ya talent na mmụọ nsọ site ya mbanye, ma na m na kwa juru ya anya ịmata ihe ụfọdụ m na-ahụ. Beyonce na m nwere ihe ole na ole na-ahụkarị. Anyị na-ma site na Texas, ma nwee ọtụtụ ezinụlọ na Houston. Anyị na-ma ndị nka onye na-na na na wepụtara gburugburu otu ọgụgụ nke solo albums (ezie na ọ bụ ihe dị nnọọ ntakịrị ihe a maara nke ọma karịa m). ma lezie, anyị na-na ma mmehie na mkpa nke àmàrà. N'iburu nke ahụ n'uche, ọ bụrụ na m nwere ohere izute ya, ndị a bụ ụfọdụ n'ime ajụjụ ndị m nwere ike ịjụ, ụfọdụ ...
Naanị Chukwu ga-ama m ikpe?
M ụtọ ekwurịta uche Chineke maka ndụ anyị, ọbụna mgbe-ekwetaghị ihe m banyere ya. Mkparịta ụka nwere ike inwe ezigbo n'ụdị na-egosi n'ezie ngwa ngwa ezie na-karịsịa mgbe anyị na-ekwu okwu banyere controversial mbipụta. Na ọ bụ mgbe fun na-agwa mmadụ na-eche na ha na-ezighị ezi. N'ihi ya, m na-agbalị kpachara anya na ihe m kwuru, na nanị na-ezo aka ihe Chineke kwuru, kama m echiche nke onwe. dị ka clockwork, ezie na, na ụfọdụ ebe n'oge mkparịta ụka, ha ga dọpụtaara trump kaadị: "Ma ọ dịghị ihe Bible na-ekwu bụghị ikpe? Ị conveniently ọsọsọp n'elu amaokwu, good?"Ọ dịghị ada ada. na Matiu 7 Jesus na-ekwu,, "Unu na-ekpe ikpe, ma ọ bụ gị onwe gị kwa ga-ekpe ikpe. "Ọbụna na ndị na mgbe na-agụ Bible nwere ike ihota akụkụ a nke ozizi si dee ya. Nke a nwere ike ịbụ ihe kasị ọma mara amaokwu Baịbụl n'oge anyị. O nwekwara ike ịbụ ndị kasị ghọtahiere ịghọtahie amaokwu a pụtara na anyị ghọtahie otú anyị na-kwesŽrŽ hụrụ ibe ha n'anya. Ya mere, ọ dị mkpa na anyị na-ajụ ajụjụ: Gịnị ka Jizọs bu n'obi mgbe ọ gwara anyị ka anyị na-ekpe ikpe? Ihe O apụtaghị ikpeazụ izu ụka, mụ na nwunye m gara a alụmdi na nwunye omumuihe na anyị na chọọchị. Dị ka anyị ...
Gịnị mere m lụrụ a White Girl
Mgbe ọ bụla m biputere foto nke ezinụlọ m na mmadụ mgbasa ozi, Ibọrọ bụ mgbe niile fun. Kacha nkịtị na-, "Nwa gị nwoke mere nwoke mara mma!"Ma ọ bụ" Gịnị a mara mma ezinụlọ!"Ma otu n'ime ndị ọzọ na-ahụkarị Ibọrọ bụ, "Ọ bụ nwunye gị na-acha ọcha?"Ndị mmadụ na-ajụ m na-egosi mgbe ụfọdụ kwa. Azịza ya bụ ee. My nwunye bụ a mix nke Hungarian, Italian, na Polish-nke ka ọtụtụ ná ndị mmadụ dị nnọọ pụtara ee, ya na ọ na-acha ọcha. Nke a dị adịghị mkpa ka ụfọdụ, ma-awụ akpata oyi ma ọ bụ ọbụna ihe na-akụda ndị ọzọ. Echeghị m na onye ọ bụla ga-eju ma ọ bụ ndakpọ olileanya agbụrụ di na nwunye, ma m ka na chọrọ ikwu banyere ihe mere m lụrụ n'èzí m "agbụrụ. The mkpebi lụọ onye si a dị iche iche agbụrụ abụghị a siri ike onye m. Ọ dịghị mgbe m nọdụrụ ala na dere si a uru na ọghọm ndepụta. Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na m mere, eziokwu ahụ bụ na nwunye m mgbe hụrụ ihe merenụ nke "Martin" ga-abụ na con Atiya. ma n'eziokwu, M na-agonize n'elu ya ma ọ bụ na-achọ ndụmọdụ banyere ma ọ bụ OK. M chekwara na ọ bụ nwaanyị m ga-alụ, n'agbanyeghị na ọ bụghị nwa. Ụfọdụ dịghị mgbe ọ ga-atụle ịlụ onye na-abụghị otu agbụrụ ...
5 Ọnyà nke Social Media
Ọbịa post site Jessica Barefield Ka m na-amalite site n'inye a disclaimer. Isiokwu a bụ banyere otú ihe ọjọọ mmadụ mgbasa ozi bụ. Ke ufat, na na nri obi postcho, ọ pụrụ ịbụ ihe dị ebube. N'ókè nke isiokwu a bụ tụọ ụzọ ụfọdụ mmadụ mgbasa ozi nwere ike ịbụ ụdị ọnyà a matara na Christian ndụ na-agba gị ume inyocha obi gị mgbe ọ na-abịa gị na-elekọta mmadụ media oriri na ikere òkè. Ndị a bụ ụzọ ise na mmadụ mgbasa ozi nwere ike na-eri nri anyị ọchịchọ mmehie. 1. Social media nwere ike oge gị n'iyi a bụ ihe ọ bụla anyị na-anụghị tupu, ma ọ bụ ọnụ ahịa na-ekwughachi. Echetara ayi na Ndị Efesọs 5:16-17 na na ụbọchị ndị ọjọọ na anyị kwesịrị ime ka ndị kasị mma jiri oge e nyere anyị. Tụlee maka oge ihe i nwere ike ime kama ịlele niile saịtị ndị ahụ. Nọ na-echere na otu oge atọrọ, anyị nwere ike na-a ndepụta nke ndị mmadụ ikpe ekpere maka na anyị na ekwentị na-eji ndị na mmezi nkeji ekpere maka ezinụlọ anyị na ndị enyi. N'ezie, na otu oge ma ọ bụ ọzọ, anyị nile bụ ikpe mara nke okodu awa na Facebook na a ụbọchị na mgbe ahụ meghee Okwu nke ...
Ihe anaghị egbu Me
Mgbe ị na-aga site a ike oge, ndị mmadụ na-mgbe niile maara ihe na-ekwu. N'ihi bụ efu clichés ma ọ bụ trite mgbalị ị ṅụrịa. M na mgbe nwere nsogbu cliché phrases- ụdị nke na-apụtaghị ihe ọ bụla iji onye si ha, ha anaghịkwa n'ezie nyere onye ahụ aka-anụ olu ha. -Enweghị isi na ihe ndị yiri, "Chin elu" na "Ọ ga-esi ka mma." N'Ezie? Kedu ka i siri mara? Ị na-eme ndị enyi gị ọ bụla hụrụ site n'inye ha ìhè, N'ụbọchị nke abụọ na-enwe olileanya na-amaliteghị na ihe ọ bụla. Mgbe mgbu dị ukwuu wɔfrɛ wɔn T anyị mkpa mkpatụ siri ike eziokwu ga-akwagide anyị. N'oge ọ na n'obi na cancer, Christopher Hitchens kwupụtara nkụda mmụọ yiri nke na ụfọdụ ndị e-efu nkebi ahịrịokwu anyị na-atụkwasị gburugburu. Ọ na-etinye peeji ole na ole awakpo otu n'ime ha n'akwụkwọ ya, enwe. ọ na-ekwu, "Ọ kachasị, M ubé kwụsịrị na-esite mara ọkwa na 'ihe ọ bụla anaghị egbu m na-eme m ike.' "Ọ gara n'ihu ikwu, "Na arụrụala ahụ ụwa ... e nwere nnọọ ọtụtụ ihe ndị nwere ike igbu gị, adịghị egbu gị, na mgbe ahụ na-ahapụ gị nke ukwu adịghị ike karị. "Ike na ị dị nnọọ na-eche ọṅụ? Ọ na-ada mwute, ma m na-eche Hitchens ziri ezi echiche. Ọ bụ nnọọ ihe kwere omume na anyị ...
Ị na-agaghị Ezi Omume Enough
Ọ bụla ugbu a na mgbe ahụ ga m agwa onye ga-ekwu na ha chọrọ ịghọ a Christian, ma ha na-eche oge a abụghị nnọọ ziri ezi. Mgbe m na-arịọ ha ihe mere, ha kọọrọ m ihe niile ha mmehie ha, niile nke adịghị ike ha, na ndi nile messed elu ihe ha na mere n'oge gara aga. Ọ dịghị mgbe m na-arụ ụka na ha banyere mmehie ha, ma m na-eme inupụ ndị ha na-echiche. Ha na-anya isi na mmehie n'ụzọ ụfọdụ disqualifies ị ịbịakwute Christ, mgbe ihe dị nnọọ iche bụ eziokwu. N'ịbụ onye mmehie anaghị eme ka anyị ghara Christ; ọ bụ ihe mere anyị mkpa Ya. Ọ bụrụ na anyị echere ruo mgbe anyị anya zuru okè makụọ ya na anyi ga na-eche ruo mgbe ebighị ebi. Na otu n'ime ndị kasị amasị m ruturu, Charles Spurgeon-agba anyị ume ka ha kwụsị achọ ka onwe anyị, na-amalite na-achọ ka Jesus. ọ na-ekwu: "The! ị na-ekwu, 'M echegharịghị ezu.' Nke ahụ na-achọ onwe gị. 'Ekwetaghị m ezu.' Nke ahụ na-achọ onwe gị. 'Abụ m kwa erughị eru.' Nke ahụ na-achọ onwe gị. 'M nwere ike ịchọpụta,'Ọzọ na-ekwu, 'Na m nwere ihe ọ bụla ezi omume.' Ọ bụ nnọọ ikike ikwu na i nwere ihe ọ bụla ezi omume; ma ọ bụ nnọọ ihe na-ezighị ezi anya n'ihi na ...
5 okwu vs. 5 Lies
The ụzọ anyị na-eme a ozi na-adabere na onye ọ si. Ka m nye gị otu ihe atụ. Ọ bụrụ na onye ala ọzọ na-ejegharị ruo m n'okporo ámá na-ekwu, "Ka m gbaziri mkpịsị ugodi ala ụgbọ ala gị ezigbo ngwa. M chọrọ inwe ụfọdụ ego nke gị uwe aka igbe,"M ga-eleghị anya-ele ya anya dị ka ọ bụ crazy na-eje ije anya. Ma ọ bụrụ na nwunye m na-abịakwute m ma na-ekwu otu ihe, M ga-enye ya mkpịsị ugodi na-enweghị a abụọ echiche. Anyị na-ege ya ma mee ihe dị iche iche dabere n'onye na-ekwu okwu. Olee banyere otu ihe dịruru ná njọ. Ọ bụrụ na m otu n'ime ezigbo ndị enyi ya asị m ga-edo ya zuru okè ikike ịchị ndụ m nile, M nwerela-ele ya anya dị ka ọ bụ crazy na-aga na-enweta ụfọdụ ndị enyi ọhụrụ. Na ọ ga-abụ ezi ka m ime otú. Ma ọ bụrụkwanụ na Chineke n'onwe Ya kwuru otu ihe? 2 Timothy 3:16 -ekwu, "Akwụkwọ Nsọ dum bụ Chineke pụta." Nke ahụ ọ bụghị dum amaokwu, ma ndị na ise okwu na-ekwu iji na-atụgharị uche na maka a ndụ. Eziokwu ahụ bụ na okwu nile nke Akwụkwọ Nsọ bụ okwu Chineke n'onwe Ya bụ ịrịba. Na m na-eche ndị na ...
Wuru na-etu ọnụ Pt. 2
Air ezute Jọdan bụ iconic. M na-eyi ha ọtụtụ ihe na-eto eto bụ ezie na, n'ihi na nne na nna m jụrụ ịzụta m ridiculously oké ọnụ akpụkpọ ụkwụ. M na ọ dịghị amasị, ma m maara na m gaghị aka m on a ụzọ. N'ihi ya, m manyere aka idi - site n'ime ka ha adịghị adị. Ọ na-a ogologo di na nwunye nke afọ na-agbalị ka o doo onwe m na Reebok cross trainers ndị nkecha. Ma ka m mewere agadi, M ghọtara ezute Jọdan ihe ndị siri ike ileghara. All ndị enyi m nwere a ụzọ ma ọ bụ abụọ, na otu enyi m na-bara nnọọ ekwe ha. Mgbe a ọhụrụ style wee si, ọ gaghi-akw us site na mpaghara Ụkwụ mkpuchi mgbe ọ nwere oge; ọ ka ndụ ya hiwe na-na ọhụrụ ụzọ. Ọ hụrụ na ọ maara ihe niile Jọdan ntọhapụ ụbọchị, ọ ga-azụta otu akpụkpọ ụkwụ dị iche iche na agba, na ya ga na-emefu n'ụtụtụ Saturday ulo-ikwū si n'ihu akpụkpọ ụkwụ na-echekwa. Ọ adaha uche m. Ya mere, n'ikpeazụ, m nwere na-ajụ onwe m, "Gịnị bụ otú pụrụ iche banyere akpụkpọ ụkwụ ndị a?! O doro anya na m na-erite n'ihi ime ihe." My enyi ibu na ezute Jọdan ihe mere a na nkwupụta. Ma ezi ma ọ, ọ na-ekwu ...
Wuru na-etu ọnụ Pt. 1
Ọ dịghị onye na-enwe mmasị aha droppers. Ị ma onye m na-ekwu okwu banyere. Ndị mmadụ na-achọ ka unu mara na ha maara ndị na eleghị anya ị chọrọ ịmata. Mgbe m chere echiche "namedropper,"N'ebe ahụ bụ otu Ihọd na ozugbo na-echeta. M na naanị zutere ya a ọgụgụ dị nta nke ugboro, ma mgbe ọ bụla anyị na-ekwu, ọkara nke mkparịta ụka anyị ẹka ọtọ na oké aha tụlee. Ọ maara ihe dị mma ọgụgụ nke "nnukwu oge" ndị, o nwere uche na-adịghị ike na-sinik aha ndị bụla mkparịta ụka. A bụ otu ihe atụ. m na-ekwu, "Hey nwoke, Kedu ihe na-akụ?"Ya reply: "Oh, ọ bụ ihe n'etiti-ehihie. -Echetara m na m na-egwuri putt putt na Michael Jackson n'etiti-ehihie na Paris. "Okwu? -eme ihe n'eziokwu, Ọ bụghị naanị aha droppers na irk anyị bụ ezie na. Ọ bụ ndị na-etu ọnụ n'ozuzu. Anyị na-enweta ike gwụrụ nke na-anụ toro ikom etu ọnụ banyere ha n'ụlọ akwụkwọ dị elu football ụbọchị (ọ bụ oge ịga na na, sir). Anyị agwụ nke anyị ùgwù enyi na ga-esi tweet banyere bụla osisi na ebe ha na-eleta. Na anyị enweghị ọtụtụ ndidi maka ndị na-zuru ezu maka anyị ọ bụla dị oké ọnụ ihe ha na-azụta (ma ọ bụrụ na ha na rappers, n'ezie). Ma ọ bụ covertly na-etu ọnụ ...
Anyị Kwesịrị Ịkwaga On?
M na-na-na-Trayvon Martin saga site na mbu. Dị ka ọtụtụ nke ị M na-ele ozi ọma mkpuchi, agụ isiokwu, na-ekwu banyere ya na enyi. Ọ adịkwaghị ọha mkparịta ụka na-ewe iwe a ọtụtụ ihe dị mkpa ụka banyere agbụrụ na America. The jọrọ njọ eziokwu nke ịkpa ókè agbụrụ e kewapụrụ n'ihu anyị ihu, na ọbụna ndị na-amasị hà ya adịghị adị a manyere ikwu banyere ya. Karịrị otu afọ mgbe e mesịrị, Trayvon egbu egbu e gbalịrị ma ha ahughi ikpe mara. Nke ahụ ọ pụtara na anyị kwesịrị ịkpali on si mbipụta? Ha hụrụ ya aka ya dị ọcha, otú a "agbụrụ mbipụta" ga-abụ ndụ n'ezie dị ka anyị chere na ndị na, nri? Ọ gwaghị nke ahụ abụghị eziokwu. M achọghị na-arụ ụka banyere ihe ndị metụtara, Trayvon uma, ma ọ bụ mkpebi ikpe ahụ a mwute ọnọdụ, ma m na-eme na-eche ụfọdụ ụka ga na-. The ikpe bụ n'elu, ma mkparịta ụka ekwesịghị. Gịnị mere ndị Interest? Amaara m na e nwere ọtụtụ ndị eche ihe mere na nke a karịsịa nwerela weghaara uche nke ọtụtụ. Ndị ọzọ na-eche ihe mere na ụfọdụ nwa folks bụ otú ngwa ngwa imeebere Trayvon Martin, n'agbanyeghị eziokwu na o nwere nsogbu nke ya onwe ya ....
N'ihi na dị ka ogologo oge dị ka m nwere ike icheta, Hip iwuli elu nwere ibu na Chineke na okpukpe. M na-apụtaghị na-atụ aro na niile rappers bụ okpukpe devotees. Ma ole na ole rappers - ma ọ bụ ihe ọ bụla artists n'ihi na okwu - ike ịma jijiji agụụ na-agụnye Chineke ebe na ha art. Ọ bụ eke na mma ka anyị na-ekwu okwu banyere Chineke, ma, ajụjụ bụ, Olee ihe anyị si? Ụfọdụ ga-asị, "Ọ bụ naanị music. -Adịghị-ya kpọrọ ihe!" Ma ihe a rapper na-ekwu na Maị bụ karịrị egwuregwu i nwere ike iche. Ụfọdụ ji Hip iwuli elu iji gosi na ha ji ezi obi na nkwenkwe okpukpe ma ọ bụ enweghị ya. Islam, The ise Percenters, Christianity, Agnosticism, ekweghị na Chineke, na okpukpe ndị ọzọ niile e-akwalite site na nkà n'ụdị. M na-eche Hip iwuli elu bụ iche ruru eru na-egosipụta iguzosi ike n'ihe na nraranye na-ihe ọ bụla anyị na-omiiko banyere. Nwere obere n'ihi na omenala si dị mkpa ido rawness na emezughị n'ihi na Hip iwuli elu na-enye ohere maka ndị ọzọ okwu, otú ị pụrụ n'ezie "akụziri." Ma ọtụtụ mgbe Hip iwuli elu bụ ihe dị ka a barbershop karịa a Sunday School na klas. Rappers elezighị ọsọ n'ọnụ, ma ha maara ihe ha na-ekwu okwu banyere ma ọ bụ. ezi obi vs. Akpachapụghị anya ...
Ndi-ebi na Good Life?
Tupu afọ m wee na-tour ọhụrụ m akwụkwọ, The Good Life. n'abalị ọ bụla, M kwuru okwu na-agbalị aza ajụjụ ahụ, "Gịnị ka ọ pụtara ibi ndụ na ndụ dị mma?" na Chattanooga, TN, anyị dere ozi na m na-ezitere ya n'elu. Akwụkwọ wepụtara na October 1, 2012 na ị nwere ike ịzụta ya ebe a. Iji mụtakwuo banyere akwụkwọ ị nwere ike pịa ebe a. Ị nwere ike ịzụta The Good Life album ebe a. Ị na-ebi na ezi ndụ?
The Future of Njem Lee
Ọtụtụ n'ime unu maara m dị ka a rapper na onye ngosi, ma eziokwu bụ, na obi m na mgbe nile onye na-ekwusa. N'ihi na dị ka ogologo oge m na a na-eme music, m kasị ọchịchọ kemgbe na-ekwusa ozioma na-ekwusa ịdị mma na ebube nke Jizọs Kraịst. Chineke amara m na nwere ohere iji music ime na on a ọha ogbo. M na-hụrụ n'anya ọ bụla nke abụọ nke ya ma na m na-agbalị ime ya na mma. N'ime afọ, M na-ghọtara na Chineke na-akpọ m na-akwadebe m bụghị naanị ime ka music, ma ikwusa ozi ọma na-ede. Ọ bụ ya mere afọ gara aga m dere The Good Life, a akwụkwọ na-aga miri n'ime ozi n'azụ m ndekọ nke otu aha. Ọ bụ na-mere m mara ọkwa ikpeazụ ọdịda na m na-enweghị ike njem nnọọ dị ukwuu dị ka m anọwo. M chọrọ ịmụta otú na-a kwesịrị ntụkwasị obi pastọ, na na ike na n'ezie na onodu nke ụka. Ya mere, m na-ewere oge itinye ego na mmụta si Chineke ozuzu aturu na chọọchị m na Washington, DC. Jehova dị njikere, dị ka m na-eje ozi na mkpara na chọọchị m, M ga-emekwa ka ...
Niile anyị chọrọ bụ Chineke
Lee bụ audio si a na-adịbeghị anya okwuchukwu m kwusara ozi ọma on Psalm 142. Anyị niile na-aga site n'oge ihe isi ike, ma psalm-egosi anyị na ọbụna n'oge ihe kasị ụfọdụ anyị nwere ike ịhụ ihe nile anyị mkpa Chineke. The anọ ihe na-: m. Chineke bụ enyi anyị n'oge nsogbu II. Chineke ga-echebe anyị n'oge nsogbu III. Chineke bụ Anyị Treasure na Times nke Nsogbu IV. Chineke bụ Onye Mgbapụta anyị na n'oge nsogbu
A bụ ihe a okwuchukwu m kwusara ozi ọma a di na nwunye ọnwa gara aga on Matthew 12:36. Biko ọ bụ ihe agbamume nye gị.
One iri na isii Video
Na ememe nke ntọhapụ nke m akwụkwọ, The Good Life, ebe a bụ ukara video maka "Otu iri na isii," si m Kacha ọhụrụ album, -akpọ The Good Life.
Na-a anya n'azụ Mpaghara ya na Njem Lee ka ọ na-atụle ọnọdụ ndị dị mma na ndị dị njọ na usoro nke na-eme ka ya ọhụrụ album "The Good Life."
Na ogbugba ndu ohu
A bụ ihe a na-adịbeghị anya okwuchukwu m kwusara ozi ọma on Jeremiah 31:33. My isi ihe ndị: m. Chineke na-arụ ọrụ N'ụwa II. Chineke na-arụ ọrụ internally III. Chineke na-arụ ọrụ Interpersonally IV. Chineke na-arụ ọrụ
Gịnị bụ My Book About?
Akwụkwọ abịa si October 1, ma ị nwere ike ibudata a sample isi na TheGoodLifeTheBook.com, ma ị nwere ike tupu-iji akwụkwọ ebe a.
Echiche na ndị Mgbakọ
M na-ele ọtụtụ n'ime ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị mgbakọ ikpeazụ ndị a izu abụọ. The n'ikwu okwu ihu ọha na m nwere ike ọ gaghị enyere ma n'elu-nyochaa ozi na oratory nkà nke oghere mmeri na-akwado ha. Onye ọ bụla nọ na ogbo gbalịrị ime ka ị na nke onye akụkọ na / ma ọ nnukwu nkwa. M ga-ekweta, ụfọdụ n'ime ha na ọchịchọ ndị magburu, ma ọtụtụ n'ime okwu obi gbakọọ, efu, na kpere na ndọrọ ndọrọ ọchịchị- m dịkarịa ala. Ụfọdụ n'ime ekwu okwu ihe ndị ogologo-ezighị ezi kwa. Ma arụ ụka nyiwe bụ isi ihe a post. Otu n'ime ihe ndị m ghọtara bụ na mgbe ndị ọzọ nọ na-agbalị na-ere gị ha na-aga ime, ha na-anwa ire gị ha worldviews. Dị ka ha, ihe propserity bụ na ala nke nkwa, na ha party chọrọ ịbụ gị Moses. N'echiche ha, ezi ndụ na-na-ndị bara ọgaranya mgbe ị rụsie ọrụ ike, na ha nwa akwukwo bu ya bụ Onyenzọpụta onye nwere ike na-gị n'ebe. Ugbu a, e nweghị ihe ọ bụ mmehie banyere akụ na ụba. Na a na-ụgwọ maka ọrụ siri ike abụghị ihe ọjọọ, ma a na-apụghị ebe olileanya anyị ụgha. Akụ na ụba ekwesịghị ịbụ anyị ọgwụgwụ ihe mgbaru ọsọ, ọ kwesịrị a ga-esi a ukwuu ọgwụgwụ. Anyị na-enweghị ike imeli na-...
The zuru okè Iwe Chineke
A bụ ihe a okwuchukwu m kwusara ozi ọma na nso nso on Psalm 95:10-11. My 3 ihe ndị dị mfe: m. Sin-akpalite iwe Chineke II. Sin bụ Alernate Path III. Sin-emekwa ka anyị si n'izu ike Chineke m ekpere na nke a bụ ihe agbamume nye gị
Gịnị mere m dere a Book
Akwụkwọ releases on October 1, ma i nwere ike tupu-iji ya ugbu a n'ebe a.
Ịkwada Lee on "Mara mma Life" site Ebe ọ chọrọ Chineke na Vimeo. The mbụ song m dere n'ihi na m na-adịbeghị anya album, "The Good Life" bụ a song na-akpọ "Mara mma Life." Ebe ọ chọrọ Chineke gwara m ka m banyere na song na obi m n'azụ ya. A bụ na ha dum blog post. Na ebe a bụ ihe lyrics na song, nke atụmatụ V. Rose: nko: Mara mma Life Inside Living aga iku ume mere ka Hope Bilie Chineke matara ihe Ọ na-eme mgbe o nyere mara mma mara mma Life Amaokwu 1: Ezigbo nwanne, M na-anụ ebe ị na m maara na ọ bụghị ihe ọ bụla mfe n'obi na-aga site na E nwere ihe a na nwa n'akpa nwa gị, ma unu adịghị agbalị ime na ị chọrọ ka gị were ya niile azụ ma ọ bụrụ na ị maara na, ma ị na-adịghị a aidia na Oge ahụ na enyi gị nwoke, na mbubreyo n'abalị Mgbe i chere na ị nọ na-eme ịhụnanya, na ị ga-eme ka ndụ Ugbu a ọ na-enwe mmetụta ikenenke, nwoke ọ na-adịghị amasị Ị na-adịghị nwetara a ndụ, gbaa, oge n'ezie adịghị mma Ike nnọọ agwa gị na m na-aghọta ihe mgbu gị Ma, m maara na ị na-ekwesịghị inwe nkụda mmụọ ma ihere Amakwaara m na nwa gị afo bụghị a egwuregwu Ọ bụ ...
Onye nwere Chineke maka akụ ya nwere ihe niile na One. Ọtụtụ ndị nkịtị akụ nwere ike na-agọ ya, ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ na-ekwe ka ha, na ọṅụ nke ha ga-otú n'obi na ha ga-adị mkpa ka ya obi ụtọ. Ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ọ ga-ahụ ha na-aga, otu mgbe otu, ọ ga siri ike tupu eche a mfu, n'ihi na ha na Isi Iyi nke ihe niile o nwere na One niile afọ ojuju, ihe ụtọ nile, niile ụtọ. Ihe ọ bụla o nwere ike hapụ o n'ezie dịghị ihe funahụrụ, n'ihi na ọ now nwere ya niile na One, na o nwere ya kpere, legitimately na ruo mgbe ebighị ebi. A.W. Tozer, The arụ Chineke
Biblical ịbụ nwoke na Ịdị Mkpa nke-achọ Ịdị si Ebe ọ chọrọ Chineke na Vimeo. My enyi na-achọ inweta Chineke jụọ m ajụjụ ụfọdụ banyere ihe mgbochi ndị nwoke na otú idozi nsogbu. A bụ ihe m kwuru
Jehova nke Ndị Mmụọ Ọjọọ
Lee bụ video si m na-adịbeghị anya okwuchukwu na Summit Church ke Raleigh, NC. M kwusara ozi ọma on Mark 5:1-20 banyere ike, ikike, na ebere nke Jesus. M na-atụ na ọ bụ ihe agbamume nye gị
Reflections on Ndị Rom 8
Olee Ndị Rom 8 -Enyere Njem Lee si Ebe ọ chọrọ Chineke na Vimeo. My enyi na-achọ inweta Chineke gwara m ka m ịkọrọ banyere akụkụ Akwụkwọ Nsọ nke kasị enyere m aka. Na nke a clip ana m echeta na Rom isi 8
Njem Lee Abụghị a robot si achọ inweta Chineke on Vimeo. N'oge na-adịbeghị Ajụjụ ọnụ, Ebe ọ chọrọ Chineke gwara m ka m ekwu okwu a obere bit banyere m song, Robot si The Good Life
The Gospel na 2 nkeji
Gịnị Bụ Gospel? site Ebe ọ chọrọ Chineke na Vimeo. Ọzọ clip si m N'ajụjụ ọnụ ndị na-achọ Chineke. Ha jụrụ m ma m nwere ike RAP Oziọma na 2 nkeji. Nke a bụ m anwa
Hip Hop na-alụso Sin
Nke a bụ akụkụ nke N'ajụjụ ọnụ m mere na-achọ inweta Chineke. M ga-biputere n'akụkụ ndị ọzọ dị ka DG-ewepụta ha Hip Hop na-alụso Sin si achọ inweta Chineke on Vimeo.
Dị ka ọtụtụ n'ime unu maara, M na a na-arụ ọrụ na a akwụkwọ na-aga na m Kacha ọhụrụ album, The Good Life. Ọfọn akwụkwọ a ga-ahapụ ya na Moody Publishers on October 1, 2012. -Agụ banyere ya na pịa tọhapụ n'okpuru. Na gaa na TheGoodLifeTheBook.com ka-amara gị ọkwa mgbe ọ tọhapụrụ. Hip iwuli elu ọgụ egwu njem Lee nyak mpụta mbụ akwụkwọ ndụ dị mma na October 1, 2012 SITE Moody nkwusa Na-abịa na oru ngo na-ewuli ke ugbu a na album ntọhapụ na redefines "The Good Life" ọnwụnwa site ndị mmadụ anaghịzi adị ndụ na ìhè nke ụgha ma na iba na a ọhụrụ na ndị ọzọ dị ebube njem. Los Angeles, Calif. (Ka 17, 2012) -Billboard Chaatị-egbupụsị Hip iwuli elu artist Njem Lee na-gearing maka ya mpụta mbụ akwụkwọ ntọhapụ, The Good Life (Moody Publishers). A n'ihu ya ọhụrụ album nke wepụtara na April 10, 2012 site apụghị Iru Records, The Good Life ga-kụrụ echekwa mba on October 1, 2012. "N'ihi na afọ, M na a na-eme music na aka ụwa anyị echiche na-ezo aka Christ - ma o nwebeghị mgbe a na-agaghị emeli na-music, n'ihi na e nwere bụ naanị nke ukwuu i nwere ike ikwurịta okwu na a song,"Na-ekwu Njem. "The album nyere ege ntị snapshots nke ezi ndụ, na akwụkwọ ga ...
-Enweta Good Life Live
The Good Life tour kicks apụ n'izu a! Chọpụta nke ụbọchị ga-dịkarịrị nso na i. Anyị na-enwe na Minneapolis, Michigan, Virginia Beach, Nashville, Orlando, na Dallas. More ụbọchị ga-atụkwasịkwara n'oge na-adịghị dị ka nke ọma! Pịa na njikọ ndị ahụ maka tiketi ma ọ bụ gaa ReachRecords.com/events.
Ndị a bụ lyrics m song iLove on ọhụrụ m album "The Good Life." Ọ dị onye ọzọ ata ahụhụ site na iLove? amaokwu 1: Enyi m nwanyị aha amalite na ihe m egbukepụ Egbukepụ-egbuke egbuke dị ka kpakpando nke elu-igwe tọrọ na-n'akụkụ m, mgbe ya gbara ọchịchịrị ya na ọ na ìhè Ọ befriends ọtụtụ, na anyị ga-efu ya anya akasiakde ke ya kama na-ele nzọụkwụ anyị Gbaa ya mgbe anyị tetara-enweghị akụta anyị ume Ọ bụ addicting, eziokwu: anyị na-na fiends Ma anyị na-adịghị sniffing mama, anyị na-dị nnọọ glued meziri Ọ na-achị anyị, -ahụ ihe àmà mgbe ọ yiri mgbaaka Anyị na-eleghị anya na-abua nke ya n'elu abụọ mmadu ya ndị nwanyị? Ụfọdụ ibu ụfọdụ nta Anyị mmekọrịta ya na em kwa ụbọchị ịnọgide na-iji Anyị na-enweta ya mgbe ọ tụlee ọbụna ma ọ bụrụ na anyị enweghị ike imeli ya Jụọ m ma m mkpa n'ezie ya? M ịdị ka, "Ụdị" Ma mgbe m hụrụ ya na nnukwu ụlọ ahịa na m nwere ulo ikpe ya na m na-enye na ngwa mma, ya nwa na-enweghị na-emebi ya na m chọrọ ya ná ndụ m, M ga-eme ihe ọ bụla n'ihi na ya Ichefu banyere a dime okoro, ọ bụ ihe ndị ọzọ dị ka a nkeji iri na ise m so ya mgbe niile,...
The Good Life bụ ebe a!
My anọ solo album, "The Good Life" ka eze tọhapụrụ! Zụrụ album si iTunes ebe a. I nwekwara ike ghota ihe album na-echekwa na Lifeway, Family Christian, Mardel, na Target & Wal-Mart (họrọ na-echekwa). Ọzọkwa, ị na-ekiri ọhụrụ video maka "M na Good" featuring Lecrae ebe a. Anyị partnered na Voice nke Martyrs on a iji mata banyere mkpagbu na-agba ume kwere ekwe iguzosi ike. Sonyere m na-ekpe ekpere na Jehova ga-eji nke a oru ngo iji maa na-agba ume ọtụtụ!
Gịnị Dị Ezigbo Ihe Good Friday?
O nweghị ihe o na-echeta ụbọchị a ọnwụ. Onye ọ bụla nke na-hụrụ n'anya nwụnahụrụ maara na ị ga-echezọ ụbọchị ha gabiga. Ọ bụ ọgwụgwụ nke a ndụ, na ọ bụ heartbreaking. N'ezie, dị ka a agbụrụ mmadụ, anyị adịghị naanị icheta ndị anyị hụrụ n'anya. Mgbe ihe dị mkpa ọha ọgụgụ anwụchu ọnwụ, anyị na-echeta na-eru uju ụbọchị ha iwere si anyị nakwa. Mba anyị na-echeta ụbọchị Martin Luther King Obere. gbagburu, na ụbọchị John F Kennedy e gburu. Ma ndị akpan akpan ụbọchị na-mgbe kwuru na dị ka ezi. Ndị ahụ bụ jọgburu ụbọchị, ebe a hụrụ n'anya ndị mmadụ nọ na gburu obi mgbagbu. ma, ka puku afọ abụọ gara aga Jesus of Nazareth gburu ya onwe ya obi mgbagbu, na anyị na-echeta na ụbọchị dị ka "Good" Friday. Gịnị bụ otú ahụ ihe ọma banyere ụbọchị ahụ mgbe ihe kasị-ekwu banyere nwoke na akụkọ ụmụ mmadụ n'ụzọ siri ike kụrụ ihe ma gbuo ndị iro ya? Eziokwu ahụ bụ na ajọ omume ga-ekpe- igbu Ọkpara Chineke dị mwute na ọ bụ doro anya na onye kasị ukwuu mmehie mgbe akanamde. Ma ọnwụ ya adịghị ka ihe ọ bụla ọzọ ọnwụ n'ihu ya ma ọ bụ mgbe ọ na- . Anyị nwere ike na-akpọ na ụbọchị "Good" Friday n'ihi ọtụtụ ihe. Ọ ...
Na na na Good Explained
"Adị m mma" bụ nke ikpeazụ songs na-e dere maka ọhụrụ m album, The Good Life. Lecrae na m n'ezie na dere na dere kpamkpam dị iche iche song, na anyị mmasị na ya na mbụ. Ma n'ikpeazụ, anyị kpebiri na ọ bụ nnọọ mara ezigbo mma; na anyị chọrọ wepụta ihe uku. N'ihi ya, m na-egwuri a ole na ole gafere ya na m na e deghị lyrics maka ma, na anyị abụọ na ịhụnanya na onye a. Ọ bụ The Epic, ike ike, na catchy. M gwara ya na m chọrọ ide ukwe na-ekwurịta okwu anyị nche n'ime Kraịst. M chọrọ agba Ndị Kraịst ume ka ha kwụsị ibi ndụ na-atụ egwu ma malite ije Ndị Rom 8. Anyị kpebiri na "M na Good" isiokwu, anyị jụrụ Jehova maka enyemaka, na anyị malitere ekewetde ke abụghị nkuku nke Metụtaruru si Atlanta studio. Anyị dere ọtụtụ n'ime anyị na vocals na abalị, na mgbe e niile mere anyị n'anya ya. Olileanya nkọwa a nke lyrics ga-enyere anyị aka ịgbari na ọdịnaya ... Amaokwu 1: M na-anụ nsogbu nke na-abịanụ m, ọnwụ bụ na nke m ụzọ / Egwu ekwu I'ma n'iyi dị egwu, ma nke ahụ abụghị ihe Onyenwe m asị / O kwuru na m bụ onye ikpe mara ezie ...
The Good Life Album Hapụ Party
Ịdebanye aha maka Man Up Conference ebe a na-amụkwu banyere m album “The Good Life" Ebe a
Ukwuu n'anya nke All
Onye ọ bụla chọrọ ka a hụ ya n'anya. Ma anyị kweta ya ma ọ bụ, anyị niile nwere a eke ọchịchọ na-eche adored na ekele ndị ọzọ. Ọtụtụ n'ime anyị na-eji anyị dum ndụ ịchọ onye na-ahụ anyị n'anya, na-enwe olileanya na a- onye ọ bụla- ka afọ ju a agụụ n'ime. Ọma bụrụ na ị na-eme atụmatụ hapụ onwe gị na romance taa na ị na-enwe olileanya na ị ga-emesị gboo agụụ, Achọrọ m ka unu mara na ihe mgbaru ọsọ gị dị oke obere. Ị gaghị ahụ onye kasị ukwuu ịhụnanya nke ndị niile na a kandụl ìhè nri abalị n'abalị. Otú ọ dị, e nwere onye na niile dị ike, niile na-eju afọ, ịhụnanya zuru okè dị gị. E nwere ihe a Chineke na-hụrụ gị karịa ị pụrụ iche n'echiche. Ịhụnanya ya bụ fickle na ị na-adịghị na-woo Ya ma ọ bụ na-arụ ọrụ maka ya. Otú Chineke Hụrụ Anyị n'Anya? Amaara m na mgbe ụfọdụ ọtụtụ n'ime anyị na-eche ma ma ọ bụ na Chineke hụrụ anyị n'anya. O yiri nnọọ anya. Ma eleghị anya, anyị ga-akwụsịtụ n'enweghị obi abụọ ma ọ bụrụ na o mere ihe iji mee ka o doo anya maka anyị. The eziokwu anyị, Ọ ugbua nwere. The Bible na-ekwu,, "Chineke na-egosi anyị ịhụnanya ya na na mgbe anyị nọ ka ndị mmehie, Kraịst nwụrụ n'ihi anyị." Na ọzọ ọ na-ekwu,...
"robot" bụ nke mbụ song nke m na-abịa album "The Good Life" atọhapụ April 10. Lyrics ka song na a free download bụ n'okpuru na abụghị m gị robot, Abụghị m onye na mmepụta oyiri Unu abụghị ndị m puppeteer m na-agaghị a drone wee ọhụrụ nwe na m na-eso Ya naanị m chọrọ ndụ dị mma ruo m gawara Amaokwu 1: Hey A mụrụ m na-erughị mmadụ Amaara m na ọ na-ada crazy Ma mụ na ha na-amụ a robot dị ka nwa ọhụrụ No ndụ n'ezie na m, M nnọọ na-egwuri m ọrụ No onwe akara, M nnọọ mere ihe a gwara m ka m buru ụzọ iji, M bụ nnọọ a ụbọchị ochie Ma m nwere ohere, -eme ka obi m dị ụzọ oyi My obi were iji, Apụghị m agbaji ebu ere n'okpuru n'agbụ ma enweghị m ike ịchịkwa N'ihi ya, m nọ na-chilling m robot uwe m robot enyi, na m robot aga Ibi robot ụzọ, eme ka nke ahụ bụ ihe niile m maara Ruo m nụrụ na m nwere ike ịbụ ndị a tọhapụrụ m robot mkpụrụ obi, M na-dị ka ... Mewe Enyi Maka Mmekọahụ Gịnị mere gị mgbe niile na-achọ ịchịkwa m? Unu abụghị ndị m onyeisi nke ahụ bụ ...
M na-adịghị a robot
"The Good Life" tụlee April 10. na- “robot" free ebe a
N'ihi na nke mbụ nke 2011, M mere adịghị songs, ọ dịghị atụmatụ, ọ dịghị egosi, ọ dịghị ihe ọ bụla. M kwagara Washington DC, were ihe 5 ọnwa anya maka a ịzụ atụrụ ụwa. Ọ bụ ezie na m na-adịghị eme njem nke ụwa na-eguzo n'ihu a oké osimiri ndị mmadụ kwa abalị, ọ bụ otu n'ime ndị kasị oge mkpụrụ ji amị nke ndụ m. Mgbe ụwa gwụrụ m malitere njem ọzọ na ji nwayọọ nwayọọ malite ịrụ ọrụ on ọhụrụ music. Around-ada m ụkwụ n'ime zuru gia-arụ ọrụ na m anọ solo album. Na mgbe ọnwa ọrụ ike, na album na-mara mma nke ukwuu mere. M ike ọbụna na-egosipụta ụdị obi ụtọ m na-hapụ ya. M na-achọ inye ndị mmadụ ihe m na-enyeghị ha n'iru. Achọghị m ka m na-remake ihe album M ugbua mere. Na m chọrọ inye gị a ọba ọhụrụ, na ọhụrụ music, na ụzọ ọhụrụ nke ime ememe otu agadi eziokwu. na 2006 on mbụ m album, Ọ bụrụ na ha maara, M chọrọ ịgwa ndị mmadụ banyere a dị ebube Chineke onye m ka ha mara. na 2008, "20/20" wee si na m chọrọ ịgba ume folks na-ahụ Onyenwe anyị na ezigbo ọhụụ. 2 afọ mgbe e mesịrị, "N'etiti ...
obi ike Leadership
A bụ MLK si obi ike na-edu ndú na ngosi (tinyekwara ụfọdụ ndị kasị mma ide m na mgbe na-agụ). Ọ jụ makụọ ezighị ezi n'iwu ma na-ajụ ndidi chere. Ọ bu ụzọ na nnọchite nke a dum agbụrụ nke ndị mmadụ. Dị ka a nwa nwoke, Na na na ekele miri emi n'ebe Chineke maka ihe nke ọ rụpụtara site n'aka ya. Na dị ka a Christian, Achọrọ m ọgụ ka ikpe ziri ezi dị nnọọ ka ike dị ka o me, eburu n'uche na ọ bụ nanị Jizọs nwere ike mee ka ikpe ziri ezi. Ọ ga-. Nke a bụ otu ihe kwuru si MLK ma ama akwụkwọ ozi. Ị kwesịrị ị na-agụ dum ihe mgbe ị na-enweta ohere. "Anyị chere n'ihi na ihe karịrị 340 afọ maka anyị n'usoro iwu ochichi obodo na Chineke nyere ikike. Mba nke Asia na Africa na-akpụ akpụ na jetlike ọsọ na-eduga n'inwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị onwe, ma anyị ka creep na ịnyịnya na-adọkpụ ijeụkwụ n'inweta iko kọfị na a nri ehihie counter. Ikekwe ọ dị mfe maka ndị nweghị mgbe ndị agba ube agha nke segregation ikwu, "Chere." Ma mgbe unu hụrụ na ajọ ìgwè na-eme lynch gị nne na nna na uche na mmiri iri gị ndị nwaanyị na ụmụnna na whim; mgbe ị hụrụ ịkpọasị jupụtara uwe ojii akọcha,...
Mmụọ nsọ site lowercase King
Taa anyị na-agba ndị nketa nke ndị na-ebute ndú nke Civil Rights ije, Dr. Martin Luther King Obere. Jehova na-eji nwoke a kpalie mba, na-akpali a ndị mmadụ kwupụta hara nhata. A ka nwere ọrụ anyị ga-arụ, ma ya onyinye ezigbo aka. Abụghị dike zuru okè, na Dr. Eze bụ sokwa, ma m na-enwe mmasị ya ọtụtụ ihe, m na-n'ike mmụọ nsọ ya ketara. Ebe a nwere ihe atọ banyere ndụ ya na-akpali m. 1. Ahuhu maka Justice Dr. Eze-arụ na-ezighị ezi na ọtụtụ n'ime anyị na ụwa, na rara ndụ ya nye ebuso ya agha. Na Bible, ọ hụrụ Chineke ọhụụ maka ya n'ụwa, Ọ hụrụ ndị amụma na-akpọ maka njedebe nke mmegbu, na Ọ bụ omiiko aka ịhụ na ikpe ziri ezi emezuwo. M na-enwe mmasị a ahuhu n'ihi na ikpe ziri ezi, na-ekpe ekpere Chineke ga-anọgide na-arụ ọrụ ya nke m obi. Achọrọ m ọgụ ka na-emegbu emegbu ma na-ekwusa Ozi Ọma ka olileanya na-adịghị. 2. Leadership N'agbanyeghị youthfulness, Dr. Eze amụma okwu na kristal doro anya ọhụụ ada enye iputa dị ka onye ndú nke ije. Ọ na-anọdụ ala azụ na mkpesa, ọ steepụ na ...
Ọbụna mgbe anyị obi ụtọ na nkasi obi ahapụ anyị, anyị pụrụ ijide nnọọ n'aka Chineke anyị agaghị. Ezra 9:9
One Life: Kee ya
A di na nwunye nke izu gara aga, M kwuru okwu na Campus Outreach National Conference banyere bụla kwere ekwe ibu ọrụ izisa ozi ọma. My ederede bụ 2 Ndị Kọrịnt 5:18-21. Lee bụ video site na nnọkọ. One Life | Kee ya - Ịkwada Lee si Campus Outreach on Vimeo. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, ebe a bụ video site na a panel ụka m bụ akụkụ nke ka nke ọma. The ụka bụ banyere campus ozi, na chọọchị dị n'ógbè, Akwa Commission, wdg: Ndi ozuzu aturu Panel site na Campus Outreach on Vimeo. Plus, M nwere ike ikwu na ị na lelee niile ndị ọzọ media site na ogbako. E nwere tọn oké ozizi na m chere na ị ga-ahụ na-ewuli elu.
Anyị na-alụ iji gosi otú ezi omume na anyị na-, na-echefu na onye ezi omume na-adịghị na-Jisos biara maka. Matt 9:13
3 Ụzọ agọnahụ Chineke
Ị gọrọ agọ Chineke nke Eluigwe na Ala? Nke bụ eziokwu bụ, nke a bụ otu ajụjụ dị mkpa na anyị nile na-eche banyere. O doro anya na Akwụkwọ Nsọ na ndu ebighebi n'efu ka ndị tụkwasịrị Chineke ma kwere Ya Good News, na dị nnọọ ikpe a rụrụ na ndị na-ekwu Ya. Ma, e nwere ihe karịrị otu ụzọ agọnahụ Chineke. Ebe a na-atọ m dị na New Testament. 1. Ha ekwetaghị na Jizọs bụ onye ọ sị na ọ bụ "Ònye bụ onye ụgha ma ọ bụghị onye na-agọnarị na Jizọs bụ Kraịst? Nke ahụ bụ na-emegide Kraịst, ọ na-agọnahụ Nna ahụ na Ọkpara. Ọ dịghị onye na-agọnahụ Ọkpara nwere Nna. Onye ọ bụla nke na-ekwupụta, Ọkpara ahụ nwekwara Nna ahụ." 1 John 2:22-23 E nwere ọtụtụ ndị anyị na n'ụwa taa na-eche banyere onwe ha dị ka mmụọ ma ọ bụ ọbụna ndị okpukpe. Ha kweere na Chineke dị adị, na ha anwaa ya ofufe n'ụzọ nke ha. Ma eleghị anya, ọbụna ha na-ahụ Jesus dị ka nwere onye nkụzi ma ọ bụ onye amụma si na Chineke. Ma ọ bụrụ na ha ekweghị na Jizọs bụ onye o kwuru na ya bụ, ha na-ịgọnahụ Ya. Ịhụ Jizọs nanị dị ka oké ...
The Ọnwụnwa nke Jesus
n'ihi na Kraịst, ajụjụ bụ ma ma ọ bụ na anyị ga ọnwụnwa bịaara, ma olee otú anyị ga-eme mgbe anyị na-eme. na Luke 4:1-2, anyị na-agụ banyere ọnwụnwa ahụ nke Jesus na otú O zara. Lee bụ audio si a nkenke ozizi m kwusara ozi ọma na ebe ahụ a na chọọchị anyị a ọnwa ole na ole azụ. M chọrọ anya na Jizọs ọnwụnwa, -atụgharị uche na ya nrubeisi, na-eche echiche banyere ihe anyị nwere ike ịmụta na nke a idaha. Gịnị bụ ihe anyị kwesịrị icheta n'oge ọnwụnwa? Lee ndị isi isi: m. Chineke Enye ohere na-eji Ọnwụnwa dị ka akụkụ nke ya Plan II. Adịghị ike na-adịghị ihe ngọpụ kwere ka ọnwụnwa merie III. Onye Ọnwụnwa esesịn a merie ndị Ọnwụnwa nke Jesus site BragOnMyLord Biko ọ bụ ihe agbamume nye gị
Olee otú anyị na ezi n'anya Of Chineke?
Olee otú anyị ezi n'anya Chineke? Ọ bụ n'ezie na otu ùgwù nke Kraịst bụ onye mmehie. N'ihi na ọ ẹkekerede ke ido anyị ebe, ka o wee bụrụ onye omempụ na anyị ụlọ, na e nwere ike si mesoo dị ka onye mmehie, ọ bụghị n'ihi na ya onwe ya mmejọ, ma n'ihi na ndị ọzọ, ebe ọ bụ dị ọcha na e gbochiri ya bụla kpatara, na ike ịtachi obi ǹtàràmahụhụ ahụ bụ n'ihi anyị- ghara onwe ya. Ọ bụ na n'otu ụzọ, n'ezie, na anyị bụ now ezi omume na ya- bụghị na nkwanye ùgwù nke anyị na-ejere afọ ojuju na ikpe ziri ezi nke Chineke site n'olu nke onwe ayi, kama n'ihi na anyị na-ekpe ikpe nke dị n'ime Kraịst ezi omume, nke anyị na-etinye on site n'okwukwe, ka ọ we ghọọ nke anyị. John Calvin Gụọ a ji nwayọọ nwayọọ na ka ọ na-imi na! M wee gafee na nke a see okwu mgbe na-akwadebe maka m ozi on 2 Ndị Kọrịnt 5:18-21 n'ihi na Campus Outreach National Conference. ezi stof
Na No e kere eke na-ezo n'ihu ya
Na ọ dịghị e kere eke na-ezo n'ihu ya, ma ihe niile gba ọtọ, oghe n'anya nke ya ahụ anyị ga-enye akaụntụ. Ndị Hibru 4:13
M na ọ, mgbe ahụ, Na Unbelief Na Jesus
M na ọ, mgbe ahụ, na ekweghi-ekwe na Jesus (Ekweghị na Jizọs) na-ịgbakụta Jesus ịchọ afọ ojuju na ihe ndị ọzọ. Na ikwere na Jizọs na-abịa Jesus n'ihi na afọ ojuju nke na-akpa anyị na anyị agụụ. Okwukwe abụghị tumadi nkwekọrịta na eziokwu na isi; ọ bụ tumadi agụụ na obi nke fastens on Jesus n'ihi na afọ ojuju. [Jesus na-ekwu,,] 'Onye na-abịakwute m agagh agụụ na onye na-ekwerekwa na Mụ agaghi-ya nku!'John Piper
Gịnị mere m lụrụ di Ya mere Young: Site My Nwunye Ele
Dị ka otu ọnwa gara aga, m dere a blog na-agwa folks mere m lụrụ di otú eto eto. O metụrụ m nnọọ ume site na Ibọrọ si niile na-agụ ya na ekpere m anọwo na Jehova ga-enyere anyị aka iche Bible banyere alụmdi na nwunye. Ọ bụrụ na ị ga-esi na-agụ na mbụ post-elele ya ebe a: N'ihi Gịnị Ka M Ga-esi di na Ya mere Young? Ọma mgbe ọtụtụ folks ruru m ma gwa m otú na-enye aka na ọ bụ maka ha, M chere na ọ ga-abụ nnọọ ka na-enye aka ime ka nwunye m, Jessica, aza ajụjụ ahụ si ele ya. Ya mere, ebe ọ bụ. Gịnị mere nwunye m kpebie ka ọdọ otú eto eto? Ọ na-ekwu ... 1. M hụrụ Chineke na mmadụ Mgbe mbụ m zutere Njem, M na-adịghị eme atụmatụ na-alụ di obula anya. Ma site nnọọ oge mbụ anyị wee si, Ama m na ihe dị iche iche banyere ya. Ọ bụ omiiko banyere Oziọma n'ụzọ na-ahụtụbeghị m n'ihu na a Ihọd afọ ndụ m. M na-ahụtụbeghị onye dị otú ahụ a mara ihe n'ọnọdụ na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Ya ekele mbet tupu mahadum ọ maara kpọmkwem ihe o chere ...
Nke a bụ ụfọdụ video si Okwuchukwu m kwusara ozi ọma tupu afọ a na San Diego. The isiokwu nke ogbako e "N'ịbụ", otú ahụ ka m kpebiri ikwusa ozi ọma na Rom 12:1-2. Gịnị ka ọ na-ele anya dị ka a kwere ekwe na-"chụpụrụ?" My isi ihe ndị na onye kwere ekwe ga ... 1. A ga-chụpụrụ site Ebere 2. A chụpụrụ ha na-efe 3. Gbanweenụ Olileanya na ya na-enye aka!
M nnọọ na-ekwu na-ekele gị ka onye ọ bụla kpere ekpere maka anyị mgbe anyị nọ na tour na oké kọntinent Africa. Jehova ji amara zaa ọtụtụ n'ime ndị ekpere, na-eji gị na anyị na-eme ka onye na mmetụta na isii dị iche iche mba. The tour ugbu a bịara ná njedebe na anyị na-aga n'ụlọ n'abalị a. Anyị na-ekele gị wee na-ekpe ekpere maka nchekwa njem na n'ihi na ike. A ole na ole nke anyị enwebeghị mmetụta nke ọma na anyị chọrọ ime ka ọ home ike. Ana m atụ anya ikenye a blog na-agwa gị ihe niile banyere anyị njem. Tupu mgbe ahụ anyị na-ekele gị ekpere
Nyere Anyị na na Unashamed Africa
Right now ọ bụ 12:34 Abụ na Botswana. Ọ bụ anyị mbụ zuru ụbọchị na Africa na Jehova bụ ugbua na-arụ ọrụ. The dum apụghị Iru oru ugbo rutere n'ebe Johannesburg n'abalị ikpeazụ na ama efe aka Botswana a ụtụtụ. Anyị na-ezute tọn akwado a n'ehihie na a bịanyere aka n'akwụkwọ nkwado anyị mere na a local Christian ahịa akwụkwọ na anyị nwere ụfọdụ oké ajụjụ ọnụ. Echi mgbede bụ nke mbụ egwu nke tour na anyị na-amped. Anyị chọrọ n'ezie nke a tour na-arụpụta ma na anyị ga-n'anya gị enyemaka. Olee otú ị pụrụ isi nyere? Ị ga-enyere anyị site n'ekpere, nke mere na ọtụtụ ndị ga-enye ekele na nnọchite anyị maka ngọzi nyere anyị site n'ekpere nke ọtụtụ. 2 Ndị Kọrịnt 1:11 Anyị kwenyesiri ike na Chineke na-eji ekpere ndị ndị Ya na-ebu ya atụmatụ. N'ihi ya, i nwere ike inyere anyị site n'ikpe ekpere. Lee ụfọdụ isi ụzọ i nwere ike ikpe ekpere ka anyị na anyị na: 1. Na Onyenwe anyị ga na-anyị ike na ike 2. Na anyị ga-postcho onwe anyị dị ka ndị ohu 3. Na concerts ga-aga nke ọma 4. Na Jehova ga-echebe anyị na ezinụlọ anyị mgbe anyị na-ewepụ 5. Na Kraịst ga-...
Nke a September anyị wepụtara a obere film na album na-akpọ “Man Up" aka-okorọbia na-ikom. A bụ ihe a music video maka “Man Up ukwe." Ị nwere ike ịzụta obere film na album ebe a
Lee bụ audio si a nnọkọ m kụziiri tupu afọ a kwesịrị ntụkwasị obi evangelism. The Kwesịrị Ntụkwasị Obi ọkwọrọikọ site BragOnMyLord N'ihi na ndị na-adịghị na oge, ebe a bụ nchịkọta nke ihe: 5 E ji mara a kwesịrị ntụkwasị obi ọkwọrọikọ ... 1. Agbakụ na-aghọtakwa ihe Gospel 2. Obi ike na Unashamed nke Gospel 3. Hụrụ ndị Lost 4. Na-adabere na Chineke n'ihi na Results 5. -Ekpe ekpere maka Lost na ohere iji na Ekekọrịta Olileanya na ọ bụ aka
N'ihi na ndị gị bụ ndị na mgbe hụrụ na video maka m song "The Invasion (dike)" Lee ya ebe a. enwe! M na-atụ ya enyere gị aka ịnọgide anya gị na Christ.
Ụnyaahụ m mere ka a mbubreyo n'abalị kwụsịtụ na ụlọ ahịa jidere ihe ole na ole na m nwere a-akpali nnọọ mmasị mkparịta ụka na onye okwu ugwo. Anyị mere ka obere okwu dị ka ọ scanned m ihe, na mgbe ahụ na o nyere m kaadị mwepụ ego ma m gwara ya na nwunye m na-ama nwere otu. Nke ahụ bụ mgbe mkparịta ụka nwetara fun. M maara nke a na-akparịta ụka nke ọma n'ihi na m na nwere ya ọtụtụ ugboro tupu. Ọ na-aga ihe dị ka ... Onye: Kedu!? Ị na-lụrụ di na nwunye? Me: Yeah m na a di na nwunye ruo afọ abụọ na ọkara ịtụnanya afọ. onye: Afọ ole ka ịdị? Ị dị ka nwa ọhụrụ. Me: Na na na iri abụọ na atọ. onye: Ị na na na otú eto eto! Gịnị mere na ụwa ị ga-eme ka? Me: Gịnị mere ọ bụghị m? na 2009, M lụrụ di na sonso iwu na-ejisike na-akwanyere ùgwù afọ iri abụọ otu afọ. N'oge m na-akpa akpa, njikọ aka, na obere alụmdi na nwunye, M na a gwara oge na oge ọzọ ajụjụ ka, "Gịnị mere ọdọ otú eto eto? Kedu ihe bụ rosh?", na m onwe onye ọkacha mmasị, "Asi na i chere na-amasị ndụ gị!" Ụfọdụ n'ime folks arịọ ajụjụ ndị a bụ ndị bịara abịa, ma ụfọdụ ndị ezinụlọ. E m crazy ka ọdọ na ndị dị otú ahụ a "-eto eto" afọ?...
Na Na Na Music
Ọ bụla ugbu a na mgbe ahụ, m na-aga azụ na-ege ntị albums na songs na n'ezie mere ka m artistically na n'ụzọ ime mmụọ mgbe m nuru ha. Otu n'ime ndị albums bụ The Solus Christus Project site Shai Linne. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị amasị m Hip iwuli elu ọba- oge. The mmepụta bụ ihe pụrụ iche (ezie na ọ bụghị commerical), ọdịnaya na-atọgbu, na Shai si in-a me nkà bụ na zuru ngosi. Nke a bụ otu n'ime ndị albums na-eme ka rappers-ajụ onwe ha, "Gịnị mere m ka na rapping ọzọ?" M ike ịgụ ihe e dere dum ndekọ a post, ma a onye nke ọkacha mmasị m amaokwu nke album. Ọ bụ shai si amaokwu "Maị Check 1,2": O nyere nd Ya dị ka ihe mgbapụta, Na na na mama na m na-ete egwú Mgbe ịgụpụta m anthems nke Kraịst, Ndị Ezi Omume Nwa Atụrụ-eme ka ìhè m Marina Die bụ naanị Jehova nke mba nwere ike mama a mba nile aṅụrụma dee enweghị ọbụna otu ihe n'ime onwe-n'ibuli? My nādighi ike okwu- erughị eru n'ezie kọwaa N'Eburo Mkpụrụ kara aka na-eme n'ụzọ ọrụ ebube omume Mgbe ọ dị afọ iri na abụọ, ọ ochie isi tụrụ ya n'anya Ya ịghọta Gwara Ndị mụrụ ya, ọ bụ ezie na O kere ha ifufe ọkpọkọ A ezi Anomaly- na onye nwere ike ichebara echiche bụ Ohu ...
Olee otú The Omume arụmụka Kwesịrị Gaa
Magburu onwe post si Trevin Wax. Anyị nile pụrụ ịmụta site na nke a na-eme amara, Bible, ọmịiko obibia http://bit.ly/oWNTno
A di na nwunye nke izu gara aga, m we yipu ha enweghị ụkpụrụ na-aga n'akụkụ nke ọzọ nke ụwa na ụfọdụ n'ime ọkacha mmasị m ndị. Tedashii, Pro, KB, Thi'sl, DJ PDogg, anyị tour manager Steadman, na m na-aga ka Australia na-eje ozi Jesus. Ihe anyị mere Anyị nọrọ izu abụọ ala n'okpuru njem site Brisbane, Melbourne, Perth, na Sydney. Na nke ọ bụla n'ime obodo ndị anyị bụ akụkụ nke nnukwu concerts sitere na site 5,000-10,000 eto eto na-. Tupu concerts, anyị gara ụfọdụ n'ụlọ akwụkwọ na kpọrọ ha ka na-egosi. Ihe e kwere ka anyị na-ekwu na ọtụtụ n'ime ndị ụlọ akwụkwọ ahụ amachaghị (n'ihi na ha na-abụghị Christian ala na ụlọ akwụkwọ), ma anyị mere ike anyị iji gbaa ụmụ akwụkwọ na-arụtụ ha Christ. Na concerts, niile ise n'ime anyị see ogbo dị ka otu rowdy, unashamed ndi oru ugbo. Anyị jijiji ndị na nkebi na n'ókè anyị nwere ike na-agbalị ịdị ka anya dị ka o kwere banyere Oziọma na-akpali anyị ime ihe anyị na-eme. Karịa ihe ọ bụla anyị chọrọ folks mara Jesus! Anyị na-agbalị ime ka n'aka na folks-ahapụ ụtọ, ọ bụghị site nkà anyị, ma site Onyenwe anyị. Ihe anyị nwere Anyị wee ...
Video of Lecrae, Eric Mason, na Njem
A bụ a video nke Lecrae, Eric Mason, na m na-ekwurịta Hip iwuli elu na Gospel
-Adịbeghị anya Gospel Coalition video nke Eric Mason, Lecrae, na m na-ekwu banyere nwa folks na “gbanwee" nkà mmụta okpukpe
Gosiputa Mmekọ Mmekọ
ọkàiwu ịgba alụkwaghịm
Joshua Oké Ifufe
The Nnọọ mwute Eziokwu
etu ọnụ mmelite
aha	 email	 zip
Banye Me Up